ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: October 2009
“ရန်ကုန်မြို့ကို မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နဲ့ ညီညွတ်စေရေးအတွက်…..”
ဒီစကားကို လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ လုံးလုံး သတင်းစာထဲမှာ မကြာခဏ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ တီဗီသတင်းထဲမှာ ဖန်တရာတေအောင် ကြားခဲ့ရတယ်။
အနှစ် ၂၀ ကျော်လာခဲ့ပြီ။ နားစွင့်လိုက်တဲ့အခါ လောလောလတ်လတ် ကြားနေရတာတွေကတော့….
ကြားလိုက်ရတဲ့ အသံတွေ။ သတင်းကောင်းတခုမှ မပါ။
မြို့ထဲမှာ ဟိုနားဒီနား လျှောက်ကြည့်ရင် လ မျက်နှာပြင်ထက်က ချိုင့်ခွက်တွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတွေပေါ်က ချိုင့်ခွက်တွေ ဘယ်ဒင်းက ပိုနက်ရှိုင်းသလဲလို့ တွေးတောစရာ ဖြစ်လာမယ်။
ဘတ်စ်ကားစီးရင် လူကြပ်မယ်။ ကားဆောင့်မယ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ဘေးဘီငေးမောလမ်းလျှောက်မိရင် ခလုပ်တိုက်မယ်။ မြောင်းပေါက်ကျွံကျမယ်။ လမ်းမနားက ကပ်လျှောက်မိရင် ဗွက်စင်မယ်။ ကားပေါ်က လှမ်းထွေးတဲ့ ကွမ်းတံတွေး စင်မယ်။
မိုးထိမြင့်မားတဲ့ အမှိုက်ပုံတွေ။ အမှိုက်ပုံမှာ အဟောင်းရှာတဲ့ ကလေးငယ်တွေ။ မိဘက မတတ်နိုင်လို့ ကျောင်းကထွက်ပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ထမင်းဆိုင်တွေမှာ စားပွဲထိုးလုပ်နေတဲ့ ကလေးလုပ်သားတွေ၊ လမ်းမပေါ်မှာ တဖက်ပိတ်ဝါးပိုးဝါး အတိုအရှည်ကိုင်ပြီး သီချင်းဆိုကာ ပိုက်ဆံရှာကြရတဲ့ မောင်နှမတတွေ။
မြို့သူမြို့သားတွေလည်း လမ်းဘေးဆိုင်တွေမှာ ယင်ကောင်တလောင်းလောင်းနဲ့ စားကြ၊ သောက်ကြ။ မှောင်ရီပျိုးတာနဲ့ တဖျတ်ဖျတ် ခြင်မောင်းကြရ။
ဆင်ခြေဖုံးက လက်လုပ်လုပ်စားတွေ… မြို့ထဲသွား နေ့စားလုပ်ဖို့ လမ်းစရိတ်မရှိလို့ အိုးခွက်ပေါင်ကြ၊ မှတ်ပုံတင်ပေါင်ကြ။
လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း အလုပ်သမားငှားထားပြီးမှ မီးမလာလို့ အလုပ်မစနိုင်။ မစောင့်နိုင်ရင် မီးစက်နဲ့ နှစ်ပါးသွားဖို့ ပြင်ကြ။
၀န်ထမ်းတွေ လခနဲ့ မလောက်လို့ ဘေးပေါက်ရှာကြ။ လာဘ်စားကြ။ အကျင့်ပျက်ကြ။
မြို့တော်သူမြို့တော်သား အများစုအတွက်တော့ ရန်ကုန်မြို့ဟာ ဒုက္ခမြို့တော်ကြီးပါပဲ။ အခုတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ အစိုးရရုံးစိုက်ရာ မြို့တော်အဖြစ်ကနေလည်း တဆင့်လျှော့ခံလိုက်ရပြီ။ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးတွေ အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို နအဖ စစ်အစိုးရက စိတ်နာနာနဲ့ ပျက်ချင်တိုင်း ပျက်စီးပစေတော့လို့ စနစ်တကျ ဖျက်စီးပြီး ထားပစ်ခဲ့လေသလားမသိ။
အဲဒီ ဒုက္ခမြို့တော်ကြီးမှာပဲ မတော်မတရား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကာ ဒေါ်လာသန်းချီပြီး အကြီးအကျယ် ကြွယ်ဝနေတဲ့ လူအနည်းစုလည်း ရှိတယ်။ ဒီလူတွေအနေနဲ့ ထိုင်း၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား စတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အဖိုးတန်အိမ်ယာတွေဝယ်မယ်။ သူတို့ရဲ့ သားတွေ၊ သမီးတွေကို နိုင်ငံရပ်ခြားက ကောင်းပေ့ဆိုတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ပို့ပြီး ပညာသင်ခိုင်းမယ်။ ဒရိုင်ဗာတွေ၊ အိမ်ဖော်တွေနဲ့ လိုလေသေးမရှိ ထောက်ပံ့ထားမယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် နိုင်ငံခြားက နာမည်ကျော်ဆေးရုံကြီးတွေမှာ လာရောက် ဆေးဝါးကုသခံယူကြမယ်။ သူတို့ရဲ့ ကတော်တွေက ရှော့ပင်းထွက်ကြမယ်။ အိမ်ကြီးရခိုင်ကြီးတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားဖြစ်အသုံးအဆောင်တွေ အလျှံပယ်သုံးစွဲနိုင်တဲ့ သူတို့တတွေအတွက်ကတော့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာ သုခဘုံကြီး ဖြစ်နေချင်လည်း ဖြစ်နေမှာပါ။
ကျနော်တို့တတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားကို ရောက်နေပေမယ့် အဲဒီ ဒုက္ခမြို့တော်ကြီးမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ကျောင်းနေဖက်တွေ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ သတိရ အောက်မေ့ဖွယ်ရာ အတိတ်ခြေရာတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကြီးအခုလို ဖြစ်ပျက်နေတာကို မြင်ရတဲ့ လူတိုင်း စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ကြတယ်။
ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာတော့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာ အဖတ်ဆည်မရအောင် ပျက်စီးနေဦးမှာပါပဲ။ ရန်ကုန်တောင် အဖတ်ဆည်လို့မရရင် ကျန်တဲ့ တတိုင်းပြည်လုံးကတော့ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။
မုန့်ဆီကြော်က ဘယ်နေမှန်းမသိ။ နှုတ်ခမ်းနာနဲ့ တည့်ပါ့မလား လို့ စိတ်ကူးယဉ်နေတယ် ပြောရင်လည်း ခံရမှာပါဘဲ။
ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျသွားလို့ ပြည်သူ့အစိုးရတရပ်တက်လာရင်တောင် ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရော၊ တတိုင်းပြည်လုံးကိုပါ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့ တော်တော်ကြိုးစားယူရလိမ့်မယ်။
Posted by ကိုပေါ on Thursday, October 22, 2009
“အဖြူအမဲ၊ နွံထဲကကြာနဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်”
(ဘလော့ဂါ ကဗျာဆရာ ပန်ဒိုရာ က “နောင်လာမယ့် အနှစ်နှစ်ဆယ်” ဆိုတဲ့အကြောင်း နှစ်ရက်အတွင်း အပြီးရေးဖို့ ချောက်တွန်း....အဲလေ...တိုက်တွန်းပါတယ်။ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကို နှစ်ရက်အတွင်းမှာ အပြေးအလွှားစဉ်းစားပြီး စာမျက်နှာ နှစ်ခုစာလောက် ချုံ့ရေးလိုက်တဲ့အခါ အောက်ပါအတိုင်း အိုးနင်းခွက်နင်း ပို့စ်တခု ထွက်လာပါတော့တယ်။)
အနာဂတ်ကို မမှန်းဆခင် အတိတ်ကို ပြန်စောင်းငဲ့ကြည့်ရင်တော့ “သားတယောက်ကိုသာ မြင်ပါသည်” ဆိုတဲ့ မူလတန်းဖတ်စာထဲက စာတကြောင်းကို ပြေးသတိရမိရဲ့။ တကယ်တမ်း ကျနော်မျက်စိထဲမှာ မြင်နေရပြန်တာကတော့ “သားနှစ်ယောက်”ပါ။ ဘယ်လိုသားတွေလဲ။ ဘာကြောင့်လဲ။
အတိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ….. ကျနော့်ဘဝသက်တမ်းတလျှောက်လုံးကို မစဉ်းစားဘဲ သူပြောငါပြော အပြောများကြတဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အတိတ်အကြောင်းလောက်ကိုသာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြောင်းပြန်သလို ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…..
“ဒီလောကကြီးမှာ ဒီလောက်စိတ်ထားမွန်မြတ်တဲ့သူတွေ၊ ကြံခိုင်တဲ့သူတွေ မရှိနိုင်တော့ဘူး”ဆိုတဲ့ ယုံမှားသံသယတွေကို လုံးဝပျက်ပြယ်သွားစေနိုင်တဲ့ သူတော်စင်တမျှ စိတ်နေစိတ်ထားမြင့်မြတ်သူတွေ၊ ဖြူစင်သူတွေ၊ ကြံ့ခိုင်သူတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ခွင့်ရခဲ့လို့ပါပဲ။
တဖက်မှာလည်း “ဒီလောက် ဆိုးသွမ်းတဲ့လူ၊ ဒီလောက် စိတ်ဓါတ် ယုတ်ညံ့တဲ့လူ၊ ဒီလောက် ယုတ်မာပက်စက်တဲ့လူတွေ လူ့လောကကြီးမှာ ရှိနိုင်ပါ့မလား” ဆိုတဲ့ ယုံမှားသံသယကို လုံးဝကွယ်ပျောက်သွားစေနိုင်လောက်အောင် ဆိုးသွမ်းသူ၊ ယုတ်မာသူ၊ အဓမ္မအမှုကို မတွန့်မဆုတ် ပြုလုပ်နေသူတွေကို အော့နှလုံးနာဖွယ် မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ခဲ့ရလို့ပါပဲ။
လူကောင်းနဲ့ လူဆိုး။ သူတော်စင်နဲ့ လူယုတ်မာ။ သားကောင်းနဲ့ သားဆိုး။ လောကကြီးရဲ့ သားနှစ်ယောက်။
အဖြူနဲ့ အမဲ၊ အလင်းနဲ့အမှောင် ဆန့်ကျင်ဖက် အရောင်နှစ်ခုကို ဘေးချင်းယှဉ်လျက် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လိုက်ရတာမျိုး။
ဒီအနှစ် ၂ဝ အတွင်းမှာပဲ လူသားတွေရဲ့ အသိပညာနဲ့ နည်းပညာတွေက အံ့မခန်းတိုးတက်ခဲ့ပါရဲ့။ မြေကြောရှုံ့တဲ့ပညာတွေ၊ အာကာသရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေ၊ ရောဂါကုထုံးအသစ်တွေ၊ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ တီထွင်ဆန်းသစ်နေတဲ့ လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေ။
ကွန်ပြူတာတွေ ပိုမြန်လာတယ်။ ပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်တွေ ပိုမြန်လာတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေ ပိုမြန်လာတယ်။ ဝန်ဆောင်မှုစနစ်တွေ ပိုမြန်လာတယ်။
အဲဒီအရာအားလုံးထက် ထူးကဲသာလွန်စွာ လူတွေရဲ့ စိတ်တွေကလည်း ပိုမြန်လာတယ်။ စိတ်ရှည်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကို လူတွေ မေ့လျော့စ ပြုလာကြတယ်။
လူတွေ မေ့လျော့လာကြတဲ့အထဲမှာ မေတ္တာတရား၊ ဂရုဏာတရား၊ မုဒိတာတရား၊ ဥပေက္ခာတရားဆိုတဲ့ ဗြဟ္မစိုရ် တရားတွေပါ ပါဝင်လာတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ “ဟီရိသြတ္တပ္ပ” ခေါ်တဲ့ မကောင်းမှုပြုရမှာကို ရှက်တတ်၊ ကြောက်တတ်တဲ့ စိတ်တွေ ကွယ်ပျောက်စ ပြုလာတယ်။ ဒီမှာတင်ပဲ လူ့လောကကြီးမှာ ပြဿနာတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေ ပိုများလာတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနှံ့အပြားမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ၊ လူမျိုးရေး မျိုးတုန်းအောင် သုတ်သင်ရှင်းလင်းမှုတွေ၊ မုဒိန်းမှုတွေ၊ ရိုက်နှက်မှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ လုယက်မှု၊ ပြန်ပေးမှု၊ သတ်ဖြတ်မှု၊ လိမ်လည်မှုတွေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဖြစ်ပွားလာတယ်။
ဒီလို ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ပူဗျာပွေနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ ဘူးလေးရာ ဖရုံဆင့်သလို သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်တဲ့ မုန်တိုင်းတွေ၊ ငလျင်တွေ၊ တောမီးတွေ၊ မြေပြိုမှုတွေ၊ ရေကြီးမှုတွေက ထပ်ဆင့်ပြီး ဖိစီးနှိပ်စက်ပြန်ပါတယ်။ ဒီသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ကျရောက်ဖြစ်ပွားတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်ဟာ ကျနော်တို့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပိုစိတ်လာသလိုပဲ။
ဒါတွေက အတိတ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ အခု မျက်မှောက်ကာလမှာ ဖြစ်နေဆဲတွေ။
ဒါတွေကို ကြည့်ရင် နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်မှာ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းတော့ တွေးတော ခန့်မှန်းနိုင်ကြမှာပါ။ အနာဂတ်ကို ကျနော်မခန့်မှန်းချင်ပါဘူး။
အခုလောလောဆယ် ကျနော့်မျက်စိထဲမှာ မြင်ယောင်နေတာကတော့ နွံထဲက ကြာပန်းကလေးတွေကိုပဲ။ နွံထဲက ကြာပန်းလေးတွေကို ထူးထူးကဲကဲ ကျနော် နှစ်သက်မိပါတယ်။
အစစ အရာရာ အလျင်စလို စီးဆင်းနေတဲ့ ဟောဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ လူသားတွေဟာ အဆုံးအစမရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေနောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်နေရာက မောပန်းငြီးငွေ့လာတဲ့တနေ့ ခဏလောက် ရပ်တန့်ပြီး သူတို့ဘဝကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်ကြမယ်။ သုံးသပ်ကြမယ်။
ပျော်ရွှင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ်ထင်လို့ နောက်ကနေ တချိန်လုံး အမောတကော လိုက်နေခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေ၊ ဂုဏ်ဒြပ်တွေဟာ လက်ဝယ်ပိုင်ပိုင် ရလာတဲ့အချိန်ကျတော့ အမှန်တကယ် ပျော်ရွှင်နှစ်သိမ့်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါရဲ့လား။ တချိန်ချိန်မှာတော့ လူသားတွေအနေနဲ့ အတွေးအမြင်တွေ၊ ခံယူချက်တွေ ပြောင်းလဲကောင်း ပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်။
အဲဒီအချိန်ကျရင် လူတွေရဲ့ သဏ္ဍာန်ကနေ ကာလအတန်ကြာ ဆွံ့ရှားပျောက်ကွယ်နေခဲ့တဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရားတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြန်လည်နေရာယူ ဝင်ရောက်လာကြမယ်။ နှစ်ရှည်လများ ခန်းခြောက်နေတဲ့ ရေအိုင်ပျက်တခုထဲကို မိုးစက်တွေ ရွာသွန်းချလိုက်သလို ရေအိုင်ထဲမှာ ကြည်လင်အေးမြတဲ့ ရေတွေနဲ့ ပြည့်လျှမ်းလာလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါကျရင် နွံထဲက ကြာပန်းတပွင့်တလေကိုသာမက ရေအမြင့်မှာ တင့်တယ်နေတဲ့ ကြာပန်းရောင်စုံလေးတွေကိုပါ မျက်စိပသာဒဖြစ်ဖွယ် မြင်တွေ့ကြရမယ်။
အခုပြောခဲ့တာ ကျနော့် ခန့်မှန်းချက်မဟုတ်သလို၊ ဟောကိန်းလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော့် မျှော်လင့်ချက်သက်သက်ပါ။ ကျနော့်ဆန္ဒသက်သက်ပါ။
အခုလောလောဆယ်တော့ ကျနော့်မျက်စိထဲမှာ နွံထဲက ကြာပန်းလေးတွေကိုပဲ ကွက်ပြီး မြင်နေမိပါတယ်။ နွံထဲက ကြာပန်းလေးတွေကိုလည်း ထူးထူးကဲကဲ ကျနော်နှစ်သက်မိပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း နောင်လာမယ့် အနှစ်၂၀ မှာတော့… ဒီလောကကြီးထဲမှာ ကျနော်ရှိသေးသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိတော့သည်ဖြစ်စေ…..
ကန္တာရတလင်းလို ပူပြင်းတဲ့ ရေအိုင်ပျက်ထဲမှာ နေဒဏ်ကြောင့် နွမ်းလျနေတဲ့ ကြာပွင့်လေး တပွင့်တလေနဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးကို လူသားတွေ မတွေ့မမြင်ကြရပါစေနဲ့။
ရေပြင်စိမ်းစိမ်းထက်မှာ ကြာပန်းတွေစုံစုံလင်လင် ဖူးပွင့်နေတဲ့ စိမ်းလဲ့ကန်သာကိုသာ လူတွေ မြင်တွေ့နိုင်ကြပါစေ။
Posted by ကိုပေါ on Monday, October 19, 2009
လွန်ခဲ့တဲ့ တနှစ်လောက်က စကားဝိုင်းတခုမှာ မိတ်ဆွေတယောက်က “သိပ်အရေးကြီးလှတဲ့ ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး” လို့ စကားခံလိုက်ပြီးမှ မေးခွန်းတခု မေးတယ်ခင်ဗျ။
“ခွပ်ဒေါင်း သင်္ကေတကို သုံးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော် တခုလောက် သိချင်တယ်ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ဒေါင်းခွပ်တာကို ဘယ်သူမြင်ဖူးသလဲ။ သိတဲ့အတိုင်း ဒေါင်းဆိုတဲ့ သတ္တဝါဟာ နောက်မှာ အမြီးအရှည်ကြီး ပါတယ်။ အဲဒီ အမြီးရှည်ကြီးတန်းလန်းနဲ့ ခွပ်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စ။ ဒီတော့ ဒေါင်းတွေ ခွပ်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ ကျနော်သေချာအောင် မေးကြည့်တာပါ”…………တဲ့။
သူ့မေးခွန်းကို အဲဒီအချိန်က ဘယ်သူမှ ရေရေရာရာ မဖြေနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ စကားဝိုင်းထဲမှာ ထိုင်နေကြသူအားလုံး ဘယ်သူမှ ဒေါင်းခွပ်တာကို မမြင်ဖူးကြဘူး။ နောက်ကနေ ဒေါင်း လိုက်ဆိတ်တာတော့ မြင်ဖူးတယ် ဆိုတဲ့လူက ဆိုကြတယ်။ နောက်က အမြီးရှည်ကြီးကို ထည့်စဉ်းစားလိုက်ရင် ဒေါင်းတွေ ခွပ်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလိုပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၄ ပြည့်မွေးနေ့တုန်းက မြန်မာပြည်ကလာတဲ့ ကျောင်းသားဟောင်းအန်ကယ်လ်ကြီးတယောက်ပြောတဲ့ အမှတ်တရ စကားထဲမှာ ခွပ်ဒေါင်းအကြောင်းပါတယ်။ ဒေါင်းတွေဟာ အင်မတန် စိတ်ကြီးတယ်တဲ့။ သူတို့ကို တိုက်ကြက်တွေထားသလို ခြေထောက်မှာ ကြိုးကွင်းနဲ့ ချည်ထားလို့မရဘူးတဲ့။ ခြေထောက်အပြတ်ခံပြီး ရုန်းထွက်တတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် မူလလက်ဟောင်း ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေမှာဆိုရင် ခွပ်ဒေါင်းရဲ့ ခြေထောက်မှာ ခြေချောင်းလေးတွေမထည့်ဘဲ ငုံးတိလေးတွေနဲ့ ဆွဲလေ့ရှိသတဲ့။ ခွပ်မိပြီဆိုရင်လည်း ရေကုန်ရေခန်းပဲတဲ့။
ဒါပေမယ့် အဲဒီစကားဝိုင်းနေ့ကတော့ ဒေါင်းတွေ ခွပ်မခွပ် ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ရေရေရာရာ မသိကြလေတော့ ကျနော်တို့အားလုံး စိတ်ထဲမှာ မအီမလည်နဲ့ပေါ့။ ဟာ… ငါတို့ တော်လှန်ရေးမှာ အကောင် ရွေးတာများ မှားသွားချေပြီလား…ပေါ့လေ။ မခွပ်တတ်တဲ့အကောင်ကြီးကို သင်္ကေတ လုပ်မိလို့ ဒီလောက် နှစ်တွေ ကြာနေတာများလားဆိုပြီး… ပြောပြီး ရယ်မိကြသေးတယ်။
အဲဒီနေ့က လူစုခွဲပြီးသာ အိမ်ပြန်ခဲ့ရတယ်။ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ အဲသည်ကိစ္စက ခိုးလိုးခုလုနဲ့ မကျေလည်ဘဲ ကပ်ပါလာတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ကွန်ပြူတာဖွင့်၊ အင်တာနက်မှာ၊ ယူကျုမှာ ရှာကြည့်တော့ ဒေါင်းခွပ်တာကို တွေ့ရပါသဗျား။ ဗီဒီယိုထဲမှာ ဒေါင်းအော်သံလည်း ပါတယ်ခင်ဗျ။ ကျနော့်နားထဲမှာတော့ “အိုးဝေ၊ အိုးဝေ” လို့ မကြားမိဘူး။ “ညှောင်း…ညှောင်း…” လို့ ကြားမိတယ်ခင်ဗျာ။
ဒေါင်းကအိုးဝေ…. ဆိုတဲ့ ကဗျာမှာ “ဒေါင်းက ညှောင်းညှောင်း” လို့ ပြောင်းဆိုရင် အရသာ ပျက်သွားမယ်ထင်ရဲ့။ ဗီဒီယိုကတော့ ဟောဒီမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီဗီဒီယိုကို ကြည့်ပြီးတဲ့အခါ ကျနော့် မဒမ်ပေါက မှတ်ချက်ချတယ်ခင်ဗျ။
“ဒေါင်းက ခွပ်တော့ ခွပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် တချီတချီ ခွပ်ဖို့ အကြာကြီး အားယူရတယ်”….ဆိုပဲ။
အေးလေ…. ဒေါင်းတွေ သဲကြီးမဲကြီး ခွပ်တာ သူမမြင်ဘူးသေးလို့ နေမှာပေါ့နော့။ ဒေါင်းတွေ သဲကြီးမဲကြီး ခွပ်တဲ့ ဗီဒီယိုလေးများတွေ့ရင် မျှဝေကြပါလို့ တောင်းဆိုလိုက်ရပါကြောင်း။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, October 18, 2009
ယခင်ပို့စ်တွင် မှတ်ချက်ရေးသူတယောက်က “ ကိုပေါအနေနဲ့ စစ်အစိုးရကို အပြစ်တင်တာကို ခဏလောက်လျှော့ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ ကယ်တင်ရှင် အတိုက်အခံတွေကို နည်းနည်း ဝေဖန်ထောက်ပြပါဦး။ တကယ်တော့ တာဝန်ရှိတဲ့အထဲမှာ အတိုက်အခံတွေလည်း ပါတယ်” ဟု ရေးသားသွားသည်။
သည်မှတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျနော့်မှာ ပြောစရာများ ရှိနေပါသည်။
ပထမအချက်မှာ “အတိုက်အခံ” ဆိုသည့် အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အခြားသူများလည်း ဖန်တရာတေအောင် ရေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ကျနော့်တို့မှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူများကို လက်ရှိအာဏာရစစ်အစိုးရနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်နေ၍သာ အတိုက်အခံဟု နှုတ်ကျိုးနေကြသည်။ လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် အတိုက်အခံဆိုမှာ တရားဝင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသည့် အာဏာရပါတီ၏ ပြိုင်ဖက် နိုင်ငံရေးပါတီများကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အရဆိုလျှင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရထားသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ အတိုက်အခံဟု ခေါ်ဆိုခြင်းငှာ မသင့်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် အမြစ်တွယ်နေသော စစ်အာဏာရှင်စနစ် အပြီးတိုင် ပျောက်ကွယ်သွားစေရန် ကြိုးပမ်းနေကြသူအားလုံးကို “အတိုက်အခံ”ဟု ခေါ်ဆိုမည့်အစား “တော်လှန်ရေးသမား”ဟူသော အမည်နာမကိုသာ ကျနော်ရွေးချယ်လိုပါသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ “တကယ်တော့ တာဝန်ရှိတဲ့အထဲမှာ အတိုက်အခံတွေလည်း ပါတယ်” ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်၍ ဖြစ်သည်။ ကျနော့်တွေးမိသည်ကတော့ တာဝန်ရှိသည်မှာ ကျနော်တို့အားလုံးပင် ဖြစ်သည်။ ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေသမျှ အများနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စအဝဝ၊ တိုင်းပြည်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်အတွက် ကျနော်တို့ အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိသည်။ သူများကိုချည်း လက်ညိုးထိုးနေရန် မသင့်။
နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်သည့် “စစ်အစိုးရကို ဝေဖန်တာ နည်းနည်းလျှော့ပြီး ကယ်တင်ရှင် အတိုက်အခံတွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြပါဦး” အချက်နှင့် ပတ်သက်၍ကား ပြောစရာတွေ အများအပြားပင် ရှိနေပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂၁ နှစ်လုံးလုံး နအဖ စစ်အစိုးရ၏ ဆိုးသွမ်းယုတ်မာ ညံ့ဖျင်းပုံများကို တောက်လျှောက် မရပ်မနား တွေ့မြင်ခဲ့ကြရသည်ဖြစ်ရာ နအဖ မကောင်းကြောင်းကို အထူးတလည် ရေးပြနေရန် လိုအပ်လှသည်ဟု ကျနော်မထင်ပါ။ ပြည်သူအများစုအနေဖြင့် နအဖ မကောင်းသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ကြ၊ ကြားကြ၊ သိကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း နအဖ ဘာလဲဆိုသည်ကို နောကျေနေကြပြီး ဖြစ်သည်။ နအဖ မကောင်းကြောင်း ထပ်မံ သက်သေပြနေစရာ မလိုတော့ပါ။ ကျနော်ရေးခဲ့သည့် ပို့စ်များတွင် နအဖကို ဝေဖန်သည့်ပို့စ်မှာ အရေအတွက်အားဖြင့် အင်မတန် နည်းပါးလှပါသည်။
မှတ်ချက်ရေးသူက “ကယ်တင်ရှင် အတိုက်အခံတွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြပါဦး” ဟုရေးသွားပါသေးသည်။ ရှေးဦးစွာ ကယ်တင်ရှင်ဆိုသော အသုံးအနှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ကျနော့်အမြင်ကို ပြောပြလိုပါသည်။
လက်ရှိအနေအထားတွင် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည့် နယ်ပယ်အားလုံးကို နိုင်ငံရေးစနစ်ကသာ အပေါ်စီးမှနေ၍ အခေါင်အချုပ်သဖွယ် တုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်နိုင်အောင် တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်ဖြစ်ရာ လက်ရှိနိုင်ငံရေးစနစ်ကို မပြောင်းလဲဘဲ ကျန်သည့် နယ်ပယ်များကို အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲယူဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ စစ်အာဏာရှင် တည်းဟူသော နိုင်ငံရေးစနစ်ကြောင့် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး စသည့် နယ်ပယ်အားလုံးတွင် အဖက်ဖက်က ချွတ်ခြုံကျကာ ပြည်သူတရပ်လုံး ဆင်းရဲဒုက္ခ အတိရောက်လျက်ရှိသည်မှာလည်း အားလုံးအသိပင်ဖြစ်သည်။
“တော်လှန်ရေးသမားအများစု”မှာ ယင်းသို့သော လက်ရှိအခြေအနေကို မနှစ်သက်နိုင်၍၊ လက်မခံနိုင်၍၊ မရှုစိမ့်နိုင်၍ အဆိုပါနိုင်ငံရေးစနစ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်၊ တော်လှန်ဖောက်ထွက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသူများဖြစ်သည်။ တနည်းဆိုရလျှင် ထိုသူတို့သည် ပြည်သူတို့ကို ဆင်းရဲတွင်းမှ ကယ်တင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသူများဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ကြိုးပမ်းသည့်အတွက် စစ်အာဏာရှင်၏ ရန်ရှာခြင်း၊ ဒုက္ခပေးခြင်းများကို သာမန်ပြည်သူများထက် ပိုမို ခံကြရသူများဖြစ်သည်။ သူတို့ကြိုးပမ်းနေသော ကယ်တင်သည့် လုပ်ရပ်မှာ မအောင်မြင်သေးသဖြင့် ကယ်တင်ရှင်ဟု မခေါ်ဆိုနိုင်သေးသော်လည်း ကယ်တင်ရန် လက်တွေ့ကြိုးပမ်းနေကြသူများအဖြစ်ဖြင့်ကား အသိအမှတ်ပြုသင့်ပေသည်။ သို့သော် ကျနော်တို့အားလုံးသည် မိမိတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက် သူတပါးကယ်တင်မှုကိုသာ ထိုင်စောင့်မနေဘဲ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သင့်ပေသည်။
တော်လှန်ရေးသမားများတွင် အကြမ်းဖျင်း အစုအဖွဲ့ ၃ ခု ခွဲချင်ပါသည်။
(၁) ပြည်တွင်းမှ အင်အားစုများ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ကျောင်းသား၊ သံဃာ နှင့် အခြား တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ)
(၂) လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများ (ကျောင်းသားတပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ)
(၃) ပြည်ပရောက် အင်အားစုများ (ပြည်ပသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာသော နိုင်ငံရေးသမားများ၊ တက်ကြွစွာလှုပ်ရှားခဲ့သူ ကျောင်းသားများ၊ လက်နက်ကိုင်ဟောင်းများ နှင့် အခြား တက်ကြွ လှုပ်ရှားသူများ)
ထိုအစုအဖွဲ့ သုံးခုစလုံးတွင် ကိုယ်စီကိုယ်ငှ အားနည်းချက်များ၊ ညံ့ဖျင်းချက်များ၊ အမှားအယွင်းများ အသီးသီး ရှိကြသည်လည်း မှန်၏။ သို့သော် ထိုအားနည်းချက်များ၊ ညံ့ဖျင်းချက်များ၊ အမှားအယွင်းများမှလွဲ၍ အများစုမှာ သူတို့၏ အမှန်တရားဖက်မှ ရပ်တည်ချက်၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့်လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲအပေါ် ယုံကြည်ချက်၊ တိုင်းပြည်အပေါ်ထားသော အရင်းခံစိတ်စေတနာ စသည်တို့မှာ မပျက်ယွင်း၊ မသွေဖီသေး။ တနည်းပြောရလျှင် သူတို့သည် ပြည်သူလူထုနှင့် တရားမျှတမှုဖက်က ရပ်တည်မြဲ ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ကျိုးအတွက် နအဖ နှင့် သွားရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သူအချို့မှ လွဲ၍ ကျန်သူများကို သူတို့၏ ရပ်တည်ချက်၊ ယုံကြည်ချက် နှင့် အရင်းခံစိတ်ထားအပေါ် ရှုတ်ချပြောဆိုရန် အကြောင်းမရှိ။ ထိုသူတို့အား တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဝိုင်းဝန်းရန်၊ အားပေးရန်၊ ထောက်ပံ့ရန်ပင် သင့်ပါသေးသည်။
(ယခု ရေးခဲ့ပြီးသမျှအထိတွင် ကျနော်သည် “တော်လှန်ရေးသမား အများစု”၊ “ထိုသူ အများစု” ဟူ၍ ဂရုတစိုက် ရေးသားခဲ့ပါသည်။ “အများစု” ဟူသည့် စကားလုံးကို သုံးရသည်မှာ “အနည်းစု” ဆိုသော အမျိုးအစားလည်း ရှိသေးသည့်အတွက် ဖြစ်သည်။ ပို့စ်ရှည်လျားမည် စိုးသဖြင့် အော့နှလုံးနာဖွယ်ကောင်းသော ထို “အနည်းစု” အကြောင်းကို နောင်မှ ပို့စ် သီးသန့် ရေးပါဦးမည်။)
တဖက်တွင်လည်း ထိုအဖွဲ့သုံးခုစလုံး၏ လုပ်ရပ်၊ အတွေးအခေါ်၊ မူဝါဒ စသည်တို့ အပေါ်တွင်ကား ပွင့်လင်းစွာ ဝေဖန်ထောက်ပြသင့်ပေသည်။ မိမိအမြင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖော်ပြသင့်သည်။ အချို့သူများသည် ဤသို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းကို ညီညွတ်ရေးကို ပျက်ပြားအောင်လုပ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာ စွတ်စွဲတတ်ကြသည်။ အမှန်တကယ်မှာမူ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုဝေဖန်တတ်သော အလေ့အထ၊ အဝေဖန်ခံနိုင်သော အလေ့အထများကို ကျင့်သားရမှသာလျှင် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသော လူ့အဖွဲ့အစည်းကို အောင်မြင်စွာ ထူထောင်နိုင်ပေမည်။ မတူညီသော အမြင်ရှိပါလျက် ကျိတ်မျိုချနေရသော လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် လွတ်လပ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း (Free Society) မဟုတ်။ အကြောက်တရားကြီးစိုးသော လူ့အဖွဲ့အစည်း (Fear Society) သာ ဖြစ်သည်။ အာဏာရှင်စနစ်ကဲ့သို့ အကြောက်တရားကြီးစိုးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် မိမိအမြင်ကို ပွင့်လင်းစွာ မထုတ်ဖော်ဝံ့ခြင်း၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မဝေဖန်ရဲခြင်း၊ အဝေဖန်မခံနိုင်ခြင်း စသည်တို့မှာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။
သို့သော် လွတ်လပ်ပွင့်လင်းသော လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသော တော်လှန်ရေးသမားများ၊ တော်လှန်ရေးအစုအဖွဲ့များအတွင်းတွင်မူ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်တတ်သောအလေ့အထ၊ အဝေဖန်ခံနိုင်သော အလေ့အထကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။
နောင်လာမည့်ပို့စ်များတွင် အထက်ပါ အင်အားစု သုံးခုအပေါ်တွင် ကျနော်၏ အမြင်များကို အလျဉ်းသင့်သလို ဆက်လက်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ကိုပေါ on Saturday, October 17, 2009
Labels: political post Comments: (21)
“ကြံရာပါ နှင့် ရှေ့ခရီးစဉ်”
သူတပါးဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းသည် မကောင်းမှုဖြစ်သည်။ ကိုယ်မပိုင်သောပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) သူမပေးသောပစ္စည်းကို မတော်မတရားသည့်နည်းဖြင့် ရယူခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ပင်တည်း။
သူတပါးပစ္စည်းကို ခိုးယူခြင်းသည် မကောင်းဟု ဆိုလျှင် သူတပါးပစ္စည်းကို ဓါးပြတိုက်လုယက်ယူခြင်းသည် သာ၍ပင် ဆိုးရွားသည်ဟု ဆိုရပေမည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူခိုးသည် ပိုင်ရှင်မသိအောင် တိတ်တဆိတ် ခိုးယူခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုင်ရှင်ကို အနာတရဖြစ်အောင်မလုပ်။ ဓါးပြသည်ကား ပိုင်ရှင်ကို အနိုင်အထက် ပြုကျင့်ကာ သူတပါးပစ္စည်းကို အဓမ္မရယူခြင်းဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကို ယူရုံမက လူကိုပါ ရန်ရှာတတ်လေရာ ဓါးပြသည် သူခိုးထက်ပိုဆိုးသည်ဟု ယေဘုယျ သတ်မှတ်ရပေမည်။ ဓါးပြသည် ထိုသို့ အနိုင်အထက်ပြုရာတွင် တုတ်၊ဓါး၊လှံ၊သေနတ် စသည့် လက်နက်များကို အားကိုးတတ်ပေသည်။
လက်နက်အားကိုးဖြင့် အနိုင်အထက်ပြုမူကာ သူတပါးပစ္စည်းကို အတင်းအကြပ် ယူတတ်ကြသူတွေထဲတွင် လုယက်သူများ၊ ဓါးပြများ၊ အချို့သော လက်နက်ကိုင်သူပုန်များ (သူပုန်အားလုံးကို မဆိုလို) နှင့် စစ်အာဏာရှင် အစိုးရများ ပါဝင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် မြန်မာစကားတွင် “သူခိုးကြီးတော့ ဓါးပြ၊ ဓါးပြကြီးတော့ သူပုန်၊ သူပုန်ကြီးတော့ အစိုးရ” ဟူသော စကားပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်မည်။
ဤစကားပုံသည် မှန်၏။ ပြည်သူတို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ စည်းစိမ်၊ ဘဏ္ဍာ၊ အခွန်အတုတ်၊ ပြည်သူပိုင် သယံဇာတ မှန်သမျှတို့ကို လက်နက်အားကိုးဖြင့် အဓမ္မရယူတတ်သော အစိုးရတရပ်သည် ဓါးပြတကာတို့တွင် အကြီးမားဆုံး ဓါးပြအမျိုးအစားပင် ဖြစ်လေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာပြည်တွင်လည်း နအဖ တည်းဟူသော လက်နက်ကိုင်ဓါးပြကြီးသည် ပြည်သူအပေါ် အနိုင်အထက်ပြုကာ သောင်းကျန်းမင်းမူလာခဲ့သည်မှာ အနှစ် ၂၀ ကျော် ကြာခဲ့လေပြီ။
မြန်မာစကားတွင် “ကျောချမှ ဓါးပြမှန်းသိသည်” ဟူသော ဆိုရိုးစကားရှိ၏။ နအဖသည် ၁၉၈၈ တွင် အာဏာရယူခဲ့စဉ်ကတည်းက ၄င်းတို့အား ဓါးပြမှန်း မသိလိုက်မည်ကို စိုးရိမ်ဘိသည့်အလား ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူများကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူတွေကို ကျောချ ပြခဲ့သည်။ တဖန် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အပြတ်အသတ် မဲအနိုင်ရသောအခါ ပေးထားသော ကတိကို ချိုးဖောက်ခြင်းပြခြင်းဖြင့် နောက်တကြိမ် ကျောချ ပြန်လေသည်။ ထို့နောက် ဒီပဲယင်းအရေးအခင်း၊ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၊ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ၊ နာဂစ် အစရှိသဖြင့် ပြည်သူတို့ ကျောကို အရှိုးရာချင်း ထပ်အောင် အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ် ကျောချခဲ့လေသည်။
ထူးဆန်းသည်ကား တတိယအုပ်စုဆိုသူများနှင့် အချို့သော နိုင်ငံရေးသမားများသည်ကား ဤမျှလောက် ကျောချပြနေပါလျက်နှင့် နအဖကို ဓါးပြမှန်းသိပုံမပေါ်။ ဖွတ်များ ဥဒဟို ၀င်ချည်ထွက်ချည် ပြုလျက်ရှိသော တောင်ပို့ကိုပင် ဘုရားအမှတ်ဖြင့် ဆက်လက် ကိုးကွယ်လျက်ရှိချေသေးသည်။
ယခု ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာလည်း အမှန်စင်စစ်တွင်မူ နအဖတည်းဟူသော ဓါးပြအစိုးရအား တရားဝင် ဓါးပြတိုက်ခွင့် လိုင်စင်ပေးမည့် ပွဲကြီးဖြစ်သည်။
တရားဥပဒေတွင် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများအား အားပေးအားမြှောက်ပြုသည်/ တနည်းတဖုံ ကူညီသည်ဆိုလျှင် ထိုသူအား ကြံရာပါ (Accomplice) အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ကြံရာပါသည်လည်း အတိုင်းအတာတခုအထိ ရာဇ၀တ်မှုကို ကျူးလွန်သည်ဟု သတ်မှတ်ကာ ထိုက်တန်သော အပြစ်ဒဏ်ကို သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲသည် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ပြည်သူလူထုအပေါ် ကျူးလွန်တော့မည့် အကြီးမားဆုံး ရာဇ၀တ်မှုကြီး တခုလည်း ဖြစ်သည်။ ပြည်သူလူထုကို တရားဝင် စစ်ကျွန်ဘ၀သို့ သွတ်သွင်းမည့် ပွဲဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ ပြည်သူလူထုအပေါ် အဓမ္မကျောချပိုင်ခွင့် (တနည်း) ပြည်သူလူထုပိုင်ဆိုင်သော အချုပ်အခြာအာဏာ၊ စည်းစိမ်၊ အခွန်ဘဏ္ဍာနှင့် သယံဇာတများကို စိတ်ကြိုက် တရားဝင်လုယက်ပိုင်ခွင့်ကြီးအား နအဖတည်းဟူသော ဓါးပြအစိုးရကို အပ်နှင်းတော့မည့် ရာဇ၀တ်မှုကြီးသာ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရာဇ၀တ်မှုကြီး အထမြောက်စေရန် ဆော်သြနေသူများ၊ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်အရွေးခံမည့်သူများကား ကြံရာပါများဖြစ်သည်။ သမိုင်းတွင် နအဖ၏ အပေါင်းပါများ၊ ကြံရာပါများအဖြစ် သတ်မှတ်စာရင်းသွင်းခံရမည့်သူများ ဖြစ်သည်။
ကြံရာပါ မဖြစ်လိုကြသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြသော တော်လှန်ရေး အင်အားစုများ အနေဖြင့်မူ…
(၁) အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး ခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးရေး၊
(၂) ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမှ ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့် မကိုက်ညီသည့်အချက်များကို ပြင်ဆင်ပေးရေးနှင့်
(၃) အားလုံးပါဝင်နိုင်မည့် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် နိုင်ငံတကာ၏ စောင့်ကြပ်လေ့လာမှုကို ခွင့်ပြုရေး…
စသည့် ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းပါ တောင်းဆိုချက်များကို မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားသင့်သည်ဟု သဘောရပါသည်။ ထိုတောင်းဆိုချက်များကို မလိုက်လျောပါက ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်သင့်ပေသည်။
အဖွဲ့ချုပ်နှင့် အခြား နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ မပါဝင်ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲကို နအဖ က မဖြစ်ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့် ကျင်းပကောင်း ကျင်းပပေလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း ဤနည်းဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် ကြုံတွေ့နေရသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သည်လည်း မြန်မာ့မြေပေါ်မှ ကွယ်ပျောက်သွားသည်မဟုတ်။ နိုင်ငံရေးပြဿနာမပြေလည်သေးသရွေ့၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် မြန်မာ့မြေပေါ်မှ မကွယ်ပျောက်သေးသရွေ့ လွတ်လပ်ရေးကို တောင့်တကုန်သော၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးကုန်သော၊ တရားမျှတမှုကို လိုလားကြကုန်သော ပြည်သူမှန်သမျှအနေဖြင့် မျိုးဆက်အဆင့်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းကာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်သွားကြရမည်သာ ဖြစ်ပေသည်။
Posted by ကိုပေါ on Thursday, October 15, 2009
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က Singapore Botanic Gardens ကို သွားလည်စဉ်က မဒမ်ပေါ ရိုက်ယူလာခဲ့တဲ့ သစ်ခွပန်းများနဲ့ အခြားပုံလေးတွေကို ပန်းချစ်သူများအတွက် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ (ပုံပေါ်မှာ ကလစ်ခေါက်ပြီး အကျယ်ချဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။)
Posted by ကိုပေါ on Monday, October 12, 2009
“မြန်မာတွေ စိတ်မရှည်တဲ့ နေရာ”
မဒမ်ပေါက သူခွင့်ယူထားတုန်းမှာ ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စင်္ကာပူတီဗီက အစီအစဉ်ကလေးတခုအကြောင်း ကျနော့်ကို ပြန်ပြောပြတယ်။ အဲဒီ အစီအစဉ်မှာ စင်္ကာပူက လူတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အပြုအမူတွေကို ဟာသစွက်ပြီး တင်ပြထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း စင်္ကာပူမှာ လူတိုင်းဟာ စားသုတ်သုတ်၊ သွားသုတ်သုတ်၊ လာသုတ်သုတ်။ တချိန်လုံး အလျင်စလို နိုင်နေကြတယ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ခဏတဖြုတ် စကားရပ်ပြောနေမိလို့ နောက်က ကျော်တက်မယ့်လူက စိတ်မရှည်တဲ့အမူအရာနဲ့ မျက်စောင်းထိုးတာမျိုး၊ ညနေဖက်မှာ သမီးရည်းစားစုံတွဲ အေးအေးလူလူ လမ်းလျှောက်လာရာကနေ လမ်းကူးရောက်ကာနီး မီးစိမ်း မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ပြနေတာကိုမြင်တော့ အကျင့်ပါနေတဲ့အတိုင်း ရုတ်တရက် သုတ်ခြေတင်ပြေးပြီး အလျင်စလို လမ်းကူးတာမျိုး စတဲ့ ကမောက်ကမ အဖြစ်အပျက်တွေ ရိုက်ကူးတင်ပြထားပါသတဲ့။
မြန်မာပြည်မှာတုန်းကတော့ အချိန်တွေဆိုတာ ပိုမှပို။ ဘာလုပ်လုပ် စိမ်ပြေနပြေနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ စိတ်ကလည်း ရှည်ကြတယ်။ ဘတ်စ်ကား အလာကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်တယ်။ မီးအလာကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်တယ်။ တီဗီမှာ ညဖက်လာတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကို ကြည့်ရဖို့အရေး ပျင်းရိငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ မာရသွန်သတင်းကြီးတွေပြီးဆုံးသည်အထိ စိတ်ရှည်လက်ရှည် မအိပ်ဘဲ စောင့်ကြရတယ်။ အစိုးရ ရုံးပြင်ကန္နားသွားရင်လည်း အလုပ်တခုပြီးမြောက်ဖို့ တနေကုန်အောင် စောင့်ရတယ်။
ဘယ်နေရာမဆို ကြန့်ကြာတတ်ပြီး စောင့်ရပါများတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေမှာ စိတ်ရှည်တဲ့ အကျင့် အလိုအလျောက် ရလာတယ် ထင်ပါရဲ့။ အရာရာကိုလည်း သည်းခံတတ်လာတယ်။ တော်ရုံအဆင်မပြေမှုတွေကိုလည်း တောင့်ခံနိုင်လာတယ်။ ဒုက္ခသုက္ခတွေကို ခါးစည်းရင်ဆိုင်လာနိုင်ကြတယ်။ မပြည့်စုံမှုတွေကိုလည်း လစ်လျူရှုလာနိုင်ကြတယ်။ တာတေလန်အောင် မကောင်းတဲ့ အစိုးရနဲ့လည်း နှစ်၂၀ကျော် နှစ်ပါးသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ စိတ်မရှည်တဲ့ နေရာဆိုတာ ရှိမှ ရှိပါသေးရဲ့လားလို့တောင် တွေးမိတယ်။
အဲသည်လို တွေးမိကာမှ မြန်မာတွေ စိတ်မရှည်တတ်တဲ့ တနေရာကို ဘွားကနဲ သွားသတိရမိတယ်။ အဲဒီ တနေရာကလည်း ကျနော့်စိတ်ကို တော်တော်လေး စနိုးစနောင့်ဖြစ်အောင် တတ်နိုင်တဲ့အရာ ဖြစ်နေပြန်တယ်။
ရန်ကုန်က ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ ရပ်ကွက်ထဲက ဗီဒီယိုရုံတွေမှာ သွားကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်…. ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်ဟာ ကွာစိ၊ နေကြာစေ့၊ အာလူးကြော်၊ ဇီးထုတ်၊ အချဉ်ထုတ် စတဲ့ အစားအသောက်မျိုးစုံနဲ့ ရုံထဲကို ဝင်ကြပါတယ်။ ရုံထဲမှာ အဲဒီအစားအသောက်မျိုးစုံကို အသံမျိုးစုံထွက်အောင် စားတတ်ကြပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာလည်း သိပ်မထူးလှဘူး။ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်၊ အာလူးကြော်၊ ချီစ်ဟော့ဒေါ့၊ နာချို၊ အအေးဘူး စတာတွေကို အမျိုးစုံအောင် ဝယ်ယူစားသုံးတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို အသံဗလံမျိုးစုံကိုလည်း ကျနော်တို့မြန်မာတွေက စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်ကြပါသေးတယ်။ စိတ်မရှည်တဲ့ ကဏ္ဍကို မရောက်သေးပါဘူး။
စကားစပ်မိလို့ ကြားဖြတ်ပြောပါရစေဦး။ ကျောင်းသားဘဝ နယ်ကိုပြန်တော့ ရွာထဲက ဗီဒီယိုရုံမှာ တခါ သွားကြည့်မိတယ်။ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ မင်းသားတခါထွက်လာတိုင်း ကျနော့်နောက်ဖက်နားဆီက “လှလိုက်သာ ဆရာမရယ်”၊ “ကြည့်ပါဦး ဆရာမရယ်… လှလိုက်သာ” ဆိုတဲ့ မိန်းမသံက ထပ်ဖန်တလဲလဲ ထွက်လာတယ်ခင်ဗျ။ အဲဒါ ဇာတ်လမ်းအစကနေ ဇာတ်လမ်းဆုံးတဲ့အထိ တောက်လျှောက်ပဲ။ သြော်… ဒီမိန်းမနှယ်၊ ဗီဒီယိုကြည့်တာ မင်းသားကိုပဲ တချိန်လုံး ကြည့်ရှုခံစားနေသလားမသိဘူးလို့ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ တွေးမိပါတယ်။။ နောက်ပြီး အဲဒီနေ့က ဗီဒီယိုကြည့်ရတာ တော်တော်ပဲ အရသာပျက်သွားပါတယ်။
မြန်မာပြည် တောကြိုအုံကြား ခေတ်နောက်ကျတဲ့ အရပ်ဒေသကမို့ ဒီလိုဖြစ်တယ်မထင်ပါနဲ့ဦး။ တခါက စင်္ကာပူ Golden Village ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ကာတွန်းဇာတ်ကားတကား သွားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဇာတ်လမ်းစလို့ မကြာသေးခင်မှာပဲ…. နောက်ခုံမှာ ထိုင်နေတဲ့ ကလေးအမေက သူ့ကလေးကို ဇာတ်လမ်း ပြန်ပြောပြလိုက်၊ အာမေဋိတ်သံတွေ ထွက်လိုက်နဲ့ အင်မတန် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာ ကြုံခဲ့ရပါသေးတယ်။ သူ့အာမေဋိတ်သံကလည်း ကြည့်ဦးဗျာ။ ဇာတ်ကားထဲမှာ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်က တခုခု အမှားလုပ်တယ်ဆိုပါစို့။ ဥပမာ ခလုပ်တိုက်လဲကျတယ် ဆိုပါစို့။ သူ့ဆီက ချက်ချင်းပဲ “အက်..အို”၊ ဒါမှမဟုတ် “အုက်..အို” ဆိုတဲ့ အသံထွက်လာတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ တကားလုံး ပြီးတဲ့အထိ အဲဒီ အက်အို နဲ့ နှစ်ပါးသွားခဲ့ရတယ်။
ပြောရင်းနဲ့ ဘေးချော်ကုန်ပြီ။ မြန်မာရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်ကတော့ လူ့ပါးစပ်ကထွက်တဲ့ အဲဒီလို အသံဗလံတွေကိုလည်း သည်းခံနိုင်ကြပါပေတယ်။ သူတို့ စိတ်မရှည်တဲ့သဘာဝက ဘယ်အချိန်ကျမှ ဘွားကနဲ ပေါ်လာသလဲဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ပြီးကာနီး သုံးမိနစ်လောက်မှာ ပေါ်လာတတ်တယ်ခင်ဗျ။ ဘယ်လိုစိတ်မရှည်တာလဲဆိုတော့ ဇာတ်လမ်းကို ပြီးအောင် ဆက်လက်ထိုင်ကြည့်ဖို့ စိတ်မရှည်တော့ဘူး။ ရုပ်ရှင်က ပြနေတုန်း တန်းလန်းကြီးပဲ ရှိသေးတယ်။ ပရိသတ်တွေက အမှောင်ထဲမှာ ထရပ်ပြီး ထမီတွေပြင်ဝတ်၊ အင်္ကျီတွေဘာတွေ ဆွဲဆန့်၊ အိတ်တွေဘာတွေလွယ်ပြီး ရုံပြင်ထွက်ဖို့ တာစူနေပြီ။ ဘယ့်နှယ့်ဗျာ… တသက်လုံးနေလာခဲ့တဲ့ အိမ်ကို မပြန်ရတော့မှာ ကျနေတာပဲ။ သုံးမိနစ်လောက်ပဲ ကျန်တော့တာ။ စောင့်ပါဦးတော့လား။ ဘာအတွက် ဒီလောက် လောနေကြသလဲမသိ။ ကြည့်နေသူတွေကိုမှ အားမနာ။ တခါတလေ ကိုယ်က အမြင်ကတ်ကတ်နဲ့ ထမပေးဘဲ ပေကပ်ထိုင်နေပြီး ဆက်ကြည့်နေရင် ကိုယ့်ရှေ့က အတင်းဖြတ်ပြန်ပြီး ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုတောင် တက်နင်းသွားတတ်ကြသေးတယ်။ တခါတလေ တချို့ရုပ်ရှင်ကားတွေက မထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာ ရုတ်တရက် ဇာတ်သိမ်းသွားပြီး၊ “ပြီးပါပြီ” စာတန်းထိုးလိုက်မှ ရုပ်ရှင်ပြီးမှန်းသိလိုက်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးဆိုရင်တော့ အဆုံးအထိ ကြည့်ခွင့်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့်ကတော့ မပြီးခင် ထပြန်ကြတာပဲ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗီဒီယိုရုံမှာ ကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပွဲကြည့်တဲ့ ပရိတ်သတ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အားလုံးမှာ အဲဒီအကျင့်ရှိတယ်။ လေးငါးမိနစ်လောက် အချိန်ကလေးကို ဘာကြောင့် အဲသည်လောက် စိတ်မရှည်နိုင်ကြသလဲဆိုတာ ကနေ့အထိ ကျနော်ဖြင့် နားမလည်နိုင်အောင်ပါပဲ။ အံ့ရော။ အံ့ရော။
Posted by ကိုပေါ on Wednesday, October 7, 2009
“ပညာဝယ်နှင့် ဗော်လံတီယာများ အကြောင်း”
ကျနော်တို့မြန်မာများ၏ ကခုန်ပွဲ၊ တီးမှုတ်ပွဲ၊ သီဆိုပွဲများတွင် ကျနော့်အနေဖြင့် နည်းနည်းလေးမှ နှစ်ခြိုက်၍ မရသော ဓလေ့ထုံးစံတခုရှိသည်။ အခြားမဟုတ်။ မကပြရသေးမီ (သို့မဟုတ်) တီးမှုတ်သီဆိုခြင်းမပြုရသေးမီမှာပင်…. “ကျနော်များ ပညာသည်လည်း မဟုတ်ရပါဘူး။ ပညာဝယ်ကလေးတွေပါ။ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ” ဟု ကြိုတင်တောင်းပန်တတ်ခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ယင်းတို့ ပညာသည် မဟုတ်သည့်ကိစ္စကို အထွေအထူး ထုတ်ပြောနေစရာမလိုပါ။ မျက်နှာကြီးတွေ မြင်လိုက်တာနှင့် ဆူပါစတားများ မဟုတ်သည်ကို ပရိသတ်က သိပြီးသားဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ ကပြဖျော်ဖြေပွဲ မတိုင်မီက အချိန်ယူကာ စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးစားအားထုတ် လေ့ကျင့်ခဲ့လျှင် ကပြသည့်နေရာမှာ၌ အမှားအယွင်း အနည်းငယ် ပါသွားစေဦး၊ ပရိတ်သတ်က ၄င်းတို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုတော့ အထင်းသား မြင်တွေ့နိုင်သေးသည်ဖြစ်ရာ ခွင့်လွှတ်သော မျက်စိနှင့် ကြည့်ကြမည်သာ ဖြစ်သည်။
သို့ပါလျက် မိမိကိုယ်ကိုယ် နှိမ့်ချခြင်း ဖြစ်သလိုလို၊ ယုံကြည်ချက် (Self-confidence) ပျောက်ဆုံးနေသလိုလို၊ ပရိသတ်၏ ဂရုဏာမဲ (Sympathy vote) ကို ရအောင်ပဲ မြှူဆွယ်ချင်သလိုလို အဓိပ္ပါယ်ပေါင်းများစွာထွက်သော ထိုစကားကို မရိုးနိုင်အောင် ပြောနေကြခြင်းအပေါ် နားမလည်နိုင်အောင် ရှိတော့သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ အဆိုပါပွဲအတွက် လက်မှတ်ကို ပိုက်ဆံပေးကာ ဝယ်ယူခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါက “အဲဒါဆိုလည်း ငါ့ပိုက်ဆံသာ ပြန်ပေးပါတော့”ဟု ထတောင်းချင်လောက်အောင် စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလှပေသည်။ “American Idol”, “Britain got talent” စသည့် ပွဲများတွင် ထိုသို့ မကမီ၊ မဆိုမီ “ပညာဝယ်ကလေးမို့ ခွင့်လွှတ်ပါ”ဟု ကြိုတင်တောင်းပန်သည့် ဖြစ်ရပ်မှာ မရှိသလောက် ရှားလှပေသည်။
အချို့သော သူများမှာ အပျော်တမ်းအဆင့်၊ ဝါသနာရှင်အဆင့်ပင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် ဝါရင့်၊သမ္ဘာရင့်ပညာရှင်ကြီးများသဖွယ် ကြည့်ကောင်းသည့် ပွဲများလည်း ရှိခဲ့ပါ၏။ ပြီးခဲ့သော နှစ်ပိုင်းများထဲက ထိုသို့သော ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ တင်ဆက်မှု အဖက်ဖက်က ကောင်းသော ပွဲများကို ညွှန်ပြပါဆိုလျှင် ပိုလီကျောင်းသားကလေးများ၏ TP Myanmar သင်္ကြန်ပွဲများကို ညွှန်းရမည်ထင်သည်။ အငြိမ့်ခန်း၊ ရွှေမန်းတင်မောင် ရွဲကုန်သည်ဇာတ်၊ ကရင်ကြိုးကျစ်အက၊ စံတော်ချိန်အက စသည်တို့မှာ ရင်ထဲကို စွဲငြိလျက် ကျန်ခဲ့ပေသည်။
ထို့သို့ မကမီ၊မဆိုမီ တောင်းပန်သည့်လုပ်ရပ်မျိုးကို ဝါသနာရှင်အဆင့်က လုပ်သည်ကို ထားဦးတော့။ ပညာသည်ကလည်း ပညာသည်တန်မဲ့ ယင်းစကားမျိုးကို ပြောထွက်တတ်ကြသေးသည်။ ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သော အမျိုးသမီး အဆိုတော်တယောက်က “သီချင်းတိုက်ဖို့ အချိန်မရလိုက်လို့ စာသားတွေ သိပ်မမှတ်မိဘူး။ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်ပါ” ဆိုတာမျိုး စင်မြင့်ပေါ်က ပြောသည်ကို ကြားရဖူးသေးသည်။ ပညာရှင်မဆန်ဟုသာ ဆိုချင်ပါတော့သည်။ ဤသည်ကိုပင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုထုံးစံဟု အယောင်ယောင် အဝါးဝါး လာပြောပါက ထိုအကျင့်ကို ပြင်သင့်ပြီဟု သဘောရပါသည်။
ထိုသို့ ဝါသနာရှင်ဆိုတိုင်း၊ အပျော်တမ်းဆိုတိုင်း၊ ပညာဝယ်ဆိုတိုင်း အမှားအယွင်းကို အမြဲတစေ ခွင့်လွှတ်စိတ်နှင့်သာ ကြည့်ရှုအားပေးနေရလျှင် ဒင်းတို့တတွေ တော်အိလျော်အိတော်ရိလျော်ရိ လုပ်နေကြသည်ကို အားပေးအားမြှောက်ပြုရာ ရောက်မနေချေပြီလော။ တောင်းပန်သူများအနေဖြင့်လည်း ကိစ္စတရပ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားလိုစိတ်၊ ပြင်ဆင်လိုစိတ် မရှိရာရောက်မနေချေပြီလော။
ဖြစ်သင့်သည်မှာ ပရိတ်သတ်ကို ကြိုတင် မတောင်းပန်ပါနှင့်။ ပရိသတ်က ဖျော်ဖြေမှု ကောင်းမကောင်းကို သူ့ဘာသူ ကြည့်ပြီး အကဲဖြတ်ပါလိမ့်မည်။ ကောင်းလျှင် ချီးမွမ်းလက်ခုပ်သံတွေကို ခံယူလိုက်ပါ။ မကောင်းလျှင်လည်း ဆဲသံ၊ ဝေဖန်သံကို သတ္တိရှိရှိ နာခံလိုက်ပါ။ သည်တကြိမ် မကောင်းသေးလျှင် နောက်တကြိမ် ပိုကောင်းရန် ပိုမိုကြိုးစား အားထုတ်ရန်သာရှိသည်။ မည်သည့်အတွက်မှ ပရိသတ်ကို ကြိုတင်တောင်းပန်နေစရာမလို။ အဲသည်လို မကောင်းတရောင်းတွေကို အမြဲတစေ သည်းခံကြည့်နေရလျှင် ကြာလျှင် အနုပညာအရည်အသွေး ကျဆင်းသွားတာသာ အဖတ်တင်လိမ့်မည်။
ဤကား ဝါသနာရှင်များ၊ အပျော်ထမ်းများ၊ ပညာဝယ်များနှင့်အကြား အမြစ်တွယ်နေသော အကျင့်ဆိုးကြီးနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ အခြား လူတန်းစား တမျိုးရှိသေးသည်။ ယင်းကား ဗော်လံတီယာ (Volunteer ) ခေါ် မိမိသဘောဆန္ဒနှင့် မိမိ ပါဝင်လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဗော်လံတီယာအချို့မှာ စိတ်ထား မတတ်ကြ။ ယင်းတို့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ နေရာမကျ၍ တစုံတယောက်က ဝေဖန်သည်ဆိုလျှင်…. “ဟေ့၊ ငါတို့က လခစားတွေ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကြီးတော်နွားကို အလကားကျောင်းပေးနေရတာ။ လာမပြောနဲ့” ဆိုသည့် အချိုးမျိုးကို ချိုးတတ်ကြလေသည်။
ဗော်လံတီယာလုပ်သည့်အတွက် လခ မရသည်မှာ မှန်ပါ၏။ သို့သော် မည်သူမဆို မိမိတာဝန်ယူထားသော အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်တော့ စိတ်အားထက်သန်စွာ ကြိုးစားအားထုတ်သင့်ပေသည်။ ဗော်လံတီယာမှန်လျှင် တော်အိလျော်အိတော်ရိလျော်ရိ လုပ်ရမည်ဟု ဘယ်သူပြောသနည်း။ မိမိအစွမ်းအစနှင့် ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းအလျောက် အကောင်းဆုံးဖြစ်လာချင်မှ ဖြစ်လာမည်ဆိုသည့်အချက်ကို နားလည်ပေးနိုင်သော်လည်း ဗော်လံတီယာမို့ စည်းမရှိကမ်းမရှိလုပ်ခြင်း၊ တဝက်တပျက်သာလုပ်ခြင်း၊ စိတ်မပါလက်မပါ လုပ်ခြင်းတို့မှာကား ဖြစ်သင့်သည့် ကိစ္စမဟုတ်။
ထို့အတူ ဗော်လံတီယာမို့ အဝေဖန်မခံနိုင်ဆိုသည့် အယူအဆသည်လည်း လုံးဝ မှားယွင်းနေသည်။ ဗော်လံတီယာလည်း လုပ်ပုံကိုင်ပုံ အချိုးမပြေပါက သူများနည်းတူ ဝေဖန်ခံရမည်သာဖြစ်သည်။ ဝေဖန်ခံရသည်နှင့် “တော်ပြီ။ အလကားလည်း လုပ်ပေးရသေးတယ်။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး သူများအပြောတော့ မခံနိုင်ပေါင်” ဟု ဆိုကာ လုပ်လက်စ အလုပ်ကို ပစ်ချကာ ထွက်သွားလျှင် ထိုသူသည် ဗော်လံတီယာအလုပ်ကို အမှန်တကယ် စေတနာရှိ၍ ဝင်လုပ်သည်ထက် နာမည်ကောင်းယူချင်ရုံသက်သက် ဝင်လုပ်သူမျိုးသာ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဗော်လံတီယာဖြစ်စေ၊ အပျော်ထမ်းဖြစ်စေ၊ ဝါသနာရှင်ဖြစ်စေ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော အလုပ်တခုကို လုပ်ပြီဆိုလျှင် ကောင်းတာ၊မကောင်းတာ နောက်ထားလို့၊ ပညာသည်များ၊ လခစားဝန်ထမ်းများနည်းတူ လုံလောက်သော ကြိုးစားမှုကိုတော့ စိုက်ထုတ်သင့်ကြပေသည်။
Posted by ကိုပေါ on Tuesday, October 6, 2009
“လံကဓေါ နှင့် ပတ်သက်၍”
“ဒီကောင် သူ့ကိုယ့်သူ လည်လှပြီ မှတ်နေတယ်။ ငါ့မြင်းကို တနေကုန် ယူစီးသတဲ့ကွာ။ ငါကလည်း သူ့လှေကို တနေကုန် ယူလှော်ပစ်လိုက်တာပေါ့…. ဘာရမလဲ၊ ဟောဟဲ….ဟောဟဲ”
ဒါကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကာတွန်းလေးတခုပါ။ ဖတ်ရစဉ်ကတော့ မိုက်လိုက်တဲ့ ကိုယ့်လူရာလို့ ရယ်ချင်ပေမယ့်… လောကကြီးမှာ တခါတလေ အိုးရွဲ့ကို စလောင်းရွဲ့နဲ့ ဖုံးဖို့ ကြိုးပမ်းရင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင် ကာတွန်းထဲက လူမိုက်ဘဝ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်ခဲ့ရတာတွေကိုလည်း ကြုံခဲ့ကြဖူးမှာပါ။
တခါတလေကျတော့လည်း ဘယ်သူကိုမှ အရွဲ့တိုက်ချင်တာ မဟုတ်ပါဘဲ ရွှေဥဒေါင်းကြီး ပြောခဲ့သလို ကိုယ့်ရဲ့သဘာဝမှာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်သဏ္ဍာန်မှာ ဆူးကြီးတွေ တချောင်းပြီးတချောင်း ပေါက်လာပြီး အလကားနေရင်း လောကကြီးကို စိတ်အချဉ်ပေါက်နေခဲ့တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။
ဆရာအောင်သင်းကတော့ စာပေဟောပြောပွဲတခုမှာ လူငယ်တွေကို ပြောခဲ့ဖူးတာ ရှိသပေါ့။ (အခုတလော တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆရာ့စကားတွေကို မကြာခဏ သတိရနေတယ်။)
“မင်းတို့ လောကကြီးကို အရွဲ့တိုက်လို့ လောကကြီးက ဘာဖြစ်သွားမှာတုန်း။ …. ငါကွာ၊ လောကကြီးကို အချဉ်ပေါက်လို့ ချီးနဲ့ငုံထွေးပစ်လိုက်တယ်….ဆိုတာလို”
ဆရာက ရယ်စရာအဖြစ် ပြောခဲ့တဲ့ အဲဒီလို ငုံထွေးတာမျိုး ဆန်ဆန်တွေလည်း ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ် တခါတခါ ကြုံတွေ့တတ်တယ် မဟုတ်ပါလား။
လောကဓံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် တုန့်ပြန်တဲ့အခါ နည်းမှန်လမ်းမှန် ခေါင်းအေးအေးနဲ့ တုန့်ပြန်တာက မှန်ကန်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း အခုအချိန်အထိ သတိလက်လွတ်နဲ့ ခေါင်းပူစွာ တုန့်ပြန်တတ်ဆဲပါ။
ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းရဲ့ တသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့ အတွေးအခေါ်များစာအုပ်ထဲမှာတော့ အချို့လူများက လောကဓံကို သွားဖြဲကလေးနဲ့ ခံနိုင်ကြတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်း ဝေဖန်ရေးသားထားတာကို တွေ့ရတယ်။ သူ့အပြောကတော့ အဲဒီလို သွားဖြဲကလေးနဲ့ ခံနိုင်တယ်ဆိုတာ နည်းနည်း ချဲ့ကားလွန်းတယ်လို့ ထင်ပါသတဲ့။ သွားဖြဲတယ်ဆိုကတည်းက မချိသွားဖြဲရာရောက်သတဲ့။ အာသဝေါကုန်ခန်းသွားတဲ့ ဘုရား၊ ရဟန္တာတွေ လောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံတဲ့အခါမှာ အဲသလို သွားဖြဲကလေးနဲ့ ခံနေမယ်လို့ သူမထင်ဘူးတဲ့။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ မတုန်မလှုပ် ကြံ့ကြံ့ခံတယ်လို့ပဲ သူယူဆပါသတဲ့။
ဘယ်သူဟာ ဘယ်လောက် စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာသလဲ၊ ကြံ့ခိုင်မှုရှိသလဲ ဆိုတာကို ရေထဲမိုးထဲရောက်တဲ့အခါ၊ အကျဉ်းအကြပ်ထဲ ရောက်တဲ့အခါ သိသာထင်ရှားတတ်ပါတယ်။ တခါတလေကျတော့ စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းထဲကလို ….ရေဆန်မှာ ချောခဲ့သမျှ၊ ရေစုန်မှာ မောဖို့သာပြင်…ဆိုတာလို ဆင်းရဲတုန်းက ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ချမ်းသာမှုဒဏ်ကိုကျမှ ခံနိုင်ရည်မရှိတာမျိုးတွေကိုလည်း ကြုံရတတ်တယ်။ ဒါမျိုးကျတော့ အောက်ခြေလွတ်တယ်၊ ဘဝမေ့တယ်လို့လည်း ခေါ်ရမှာပေါ့။
လောကဓံရှစ်ပါးဟာ ဘာလဲဆိုတာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရိုက်ပြီး ရှာကြည့်လိုက်တော့ Planet Forum မှာ lynconqueror ဆိုသူက တင်ပေးထားတာကို တွေ့ရတယ်။ တော်တော်များများ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပေမယ့် ဒီမှာ ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
“ လောကသားတွေ အမြဲတွေ့ကြုံခံစားနေရသော တရားရှစ်ပါး၊ ဆင်ခြင်တုံကင်းသောသူကို ရူးသွပ်တုန်လှုပ်စေနိုင်သော သဘောရှိ၏။
(၁) လာဘ - လာဘ် ပေါများ၍ တက်ကြွတုန်လှုပ်ခြင်း။
(၂) အလာဘ - လာဘ်နည်း၍ ညှိုးငယ်တုန်လှုပ်ခြင်း။
(၃) ယသ - အခြွေအရံများ၍ တက်ကြွတုန်လှုပ်ခြင်း။
(၄) အယသ - အခြွေအရံနည်း၍ ညှိုးငယ်တုန်လှုပ်ခြင်း။
(၅) ပသံသာ - ချီးမွမ်းခံရ၍ ဝမ်းမြောက်တုန်လှုပ်ခြင်း။
(၆) နိန္ဒ - အကဲ့ရဲ့ ခံရ၍ ဝမ်းနည်းတုန်လှုပ်ခြင်း။
(၇) သုခ - ချမ်းသာကိုစွဲ၍ ဝမ်းသာတုန်လှုပ်ခြင်း။
(၈) ဒုက္ခ - ဆင်းရဲကိုစွဲ၍ ညှိုးငယ်ပူပြင်း စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်း။ ” တို့ ဖြစ်ပါသတဲ့။
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ဒီလောကကြီးထဲ ရောက်လာတာနဲ့ လောကဓံရှစ်ပါးထဲက အနည်းဆုံး တပါးပါးနဲ့ ကြုံကြရမှာပါ။ တခါတလေကျတော့ လူတယောက်ဟာ အကောင်းတွေချည်းကြုံနေရလို့ လောကဓံကို မခံရဘူးလို့ ထင်စရာရှိတယ်။ တကယ်တော့ သူလည်း လောကဓံကို ခံနေရတာပါပဲ။ အပေါ်မှာပြောတဲ့အတိုင်း ဆင်ခြင်တုံကင်းသောသူတို့ကို ရူးသွပ်တုန်လှုပ်စေနိုင်သော သဘောရှိ၏ ဆိုတာလို ချမ်းသာကိုကြုံပေမယ့် ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့ရင် ပျက်စီးကိန်းကြုံနိုင်ပါသေးတယ်။
လောကဓံဆိုတာကို ရှောင်လွှဲဖို့ရာမဖြစ်နိုင်တော့ ကြံ့ခိုင်နိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားကြတာပေါ့။
Posted by ကိုပေါ on Sunday, October 4, 2009
Labels: political post Comments: (17)
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးထက်သန်သူ တပ်မတော်အရာရှိဟောင်းတယောက်နဲ့ ခင်မင်မိတဲ့အလျောက် ကျနော်က တခုခုဆိုရင် သူတို့တပ်ထဲက လက်သုံးစကားနဲ့ နောက်ပြောင်တတ်တယ်။
“ဒီမယ်၊ ဟေ့လူ… ရေဘူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူး။ ရေပါတာပဲ လိုချင်တယ်”
အံမယ်… သူကလည်း ခေသူမဟုတ်။ ဟာသဉာဏ် တော်တော်ရွှင်တဲ့လူဆိုတော့….
“ဟုတ်ကဲ့….ကိုပေါ။ ကျနော် ရေကို ဗိုက်ထဲမှာ ထည့်သယ်လာပါတယ်။ ကိုပေါ လိုချင်ရင် ခွက်ခံလိုက်ပါ”
ဆိုတာမျိုး ပြန်ခွပ်တတ်တယ်။ ဘေးက လူတွေကလည်း သူ့ဟာသကို သဘောကျပြီး တဟားဟားပေါ့။
အခု သူ့ဟာသကို ပြန်ပြောင်းသတိရမိရင်း စဉ်းစားမိတာ တခုရှိတယ်။
“ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ရေပါတာ အဓိက” ဆိုပေမယ့်လည်း သယ်လာပုံ သယ်လာနည်းကလည်း အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို တွေးမိတယ်။ သောက်ရေခပ်ခိုင်းတာကို သုံးပြီးသား မိလ္လာအိုးနဲ့ ခပ်လာခဲ့တယ်ဆိုပါစို့။ သောက်ရမယ့်လူက ဘယ်သတီနိုင်ပါဦးတော့မလဲ။ ခပ်လာတဲ့ ရေလည်း မသန့်ရှင်းတော့ဘူးပေါ့။ သယ်ယူပုံ သယ်ယူနည်းကြောင့် သောက်ရေရဲ့ အရည်အသွေး ပျက်စီးသွားတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စကားစပ်မိလို့ ကျနော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ မဆိုင်လှပေမယ့် ကျနော့်အသိ တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တချို့ ကျောင်းသားဘဝ ကွင်းဆင်းစဉ်က ကြုံခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတခုကို ဖောက်သည်ချပါရစေဦး။
တခါက တိ၊ကု ကျောင်းသားတစုဟာ မြို့ပြနဲ့ ဝေးလံသီခေါင်လှတဲ့ ကျေးလက်တောရွာတွေမှာ သွားရောက် ကွင်းဆင်းပြီး ကျွဲနွား၊ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်တမ်းကောက်တာတွေ၊ ကျွဲနွားကျန်းမာရေးကွင်းဆင်းကုသတာတွေ၊ ပညာပေးတာတွေ လုပ်ရသတဲ့။ အဲဒီခေတ်က တောရွာဓလေ့ ဖော်ရွေတတ်ကြတော့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေ မပြန်ခင် ညနေဖက်မှာ ရွာထဲက အိမ်တအိမ်က ထမင်းဖိတ်ကျွေးသတဲ့။ ဟင်းတွေကလည်း ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ၊ ချက်ထားတာကလည်း ဖောဖောသီသီ၊ အိမ်ရှင်တွေကလည်း သဘောကောင်းဆိုတော့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေလည်း စားကြတာ ခေါင်းမဖော်ဘူးပေါ့။
“အားမနာနဲ့၊ စားသာစားပါ ဆရာမလေးတို့။ ထမင်းကုန်ရင်လည်း ထပ်ယူပါနော်”
“အို….စိတ်သာချ။ ယူမှာ အစ်မကြီး။ ပန်းကန်ထဲမှာ ကုန်တာနဲ့ ယူပြီပဲ”
အဲ…. တကယ်တမ်း ထမင်းကုန်လို့ ထပ်ယူမယ် လုပ်တဲ့အခါ အင်မတန် စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်စရာ အဖြစ်အပျက်နဲ့ ကြုံရတော့တာပါပဲ။ ဘာလဲဆိုတော့ ထမင်းလိုက်ပွဲထည့်လာတဲ့ ထမင်းအုပ်က လူမမာတွေ သုံးတတ်တဲ့ မိလ္လာအိုးကြီးဖြစ်နေပါသတဲ့။ ထမင်းထပ်ယူမယ့် ကျောင်းသားတွေလည်း လက်တွန့်သွားတာပေါ့။ အိမ်ရှင်က…
“အသစ်ကြီးပါ ဆရာမတို့ရယ်။ ဝယ်လာပြီး တခါမှ မသုံးရသေးပါဘူး။ ဘုရားစူးရပါစေရဲ့။ အိမ်မှာ ထမင်းလိုက်တဲ့ ကြွေအုပ် မရှိလို့ပါ”……. လို့ ပျာပျာသလဲ ပြောရှာပါသတဲ့။
ကျောင်းသားတွေကလည်း အိမ်ရှင်ပြောတာကိုတော့ ယုံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိတယ်မို့လား။ အသစ်ကြီးပါ ဆိုပေမယ့်လည်း ဘာကြီးမှန်းသိနေတော့ စားရမှာ မသတီဘူးပေါ့။ အဲဒီမှာ စောစောက “ထပ်ယူမှာ၊ စိတ်သာချ” ပြောထားတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်း အိမ်ရှင်ကို အားနာတော့ အီလည်လည်နဲ့ပဲ ထမင်းထပ်ယူကြရသတဲ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအဖြစ်အပျက်က သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေအကြားမှာ နောက်ကြုံတိုင်း ပြန်ပြောပြီး ရယ်မောစရာ အဖြစ်အပျက်ကြီးတခု ဖြစ်သွားတော့တာပေါ့။
ဒါတောင်မှ တကယ်မသုံးရသေးတဲ့ မိလ္လာအိုးနော်။ ကျနော့်ဘ၀မှာ အဲသည်လို သူ့နေရာနဲ့ သူမဟုတ်ဘဲ ထော်လော်ကန့်လန့် လုပ်တဲ့ အဖြစ်မျိုးကြုံရရင် နားထဲမှာ “အသစ်ကြီးပါ ဆရာမတို့ရယ်။ တခါမှ မသုံးရသေးပါဘူး” ဆိုတဲ့ စကားကို ပြန်လည်ကြားယောင်ပြီး ရယ်ချင်စိတ်နဲ့ အူထဲမှာ ကျလိကျလိ ဖြစ်ရပါတယ်။ (ဒီထမင်းအုပ်ကိစ္စက အချပ်ပိုပါ။)
စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ ရေသယ်တဲ့ ကိစ္စကနေ နောက်တဆင့်တက်စဉ်းစားပြန်ရင် လူ့လောကမှာ လူတွေကို အကျိုးရလဒ်ပဓာန၀ါဒီတွေနဲ့၊ လုပ်ရပ်ပဓာန၀ါဒီတွေလို့ အကြမ်းဖျင်း နှစ်မျိုးနှစ်စား ခွဲခြားရမယ်ထင်ပါရဲ့။
ပထမတမျိုးက ဘယ်နည်းပဲသုံးသုံး အကျိုးရလဒ်ကောင်းဖို့သာ ပဓာန ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေပဲ။ ဒီလူမျိုးတွေဟာ လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ ဘယ်လမ်းကသွားရသွားရ သင့်တော်တယ်၊ တရားတယ်၊ မှန်ကန်တယ်လို့ ယူဆတတ်ကြတယ်။
ဒုတိယတမျိုးကတော့ ပန်းတိုင်ကို သွားရာလမ်းတလျှောက်မှာ လုပ်ရပ်တခုချင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရပ်လား၊ မှန်ကန်တဲ့လုပ်ရပ်လား၊ သင့်တော်တဲ့ လုပ်ရပ်လား၊ တရားတဲ့ လုပ်ရပ်လား စတဲ့အချက်တွေကို ဦးစားပေးတယ်။ လုပ်ရပ်တခုချင်းကောင်းခဲ့ရင် အဆုံးသတ်ရလဒ်လည်း မုချကောင်းမယ်လို့ သူတို့ ယုံကြည်ကြတယ်။ တကယ်လို့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဆုံးရလဒ်ဟာ မျှော်လင့်သလို ဖြစ်မလာခဲ့ရင်တောင် လုပ်ခဲ့သမျှတွေဟာ မှန်ကန်ခဲ့တဲ့အတွက်၊ တရားမျှတမှုရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဖြေသာတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
အဲဒီနှစ်မျိုးနှစ်စားမှာ ပထမအမျိုးအစား (အကျိုးရလဒ်ပဓာနဝါဒ)ဟာ အစွန်းရောက်စွာ ကျင့်သုံးလာရင် လူ့လောကအတွက် အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်လို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။
အချို့သော အမှုကိစ္စတွေမှာ နည်းလမ်းတမျိုးထက် ပိုသုံးနိုင်ပြီး နည်းလမ်းတွေအနေနဲ့လည်း ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်း ခွဲခြားစရာမလိုတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ…. ပန်းကန်ထဲက ကျောက်ကျောတုံးလေးကို ဇွန်းနဲ့ပဲ ကော်စားစား၊ ခက်ရင်းနဲ့ပဲ ထိုးစိုက်ပြီးစားစား၊ ဒါမှမဟုတ် သွားကြားထိုးတံလို တုတ်တံလေးနဲ့ ထိုးပြီးစားစား၊ လက်နဲ့ပဲ ကောက်စားစား ဘယ်နည်းနဲ့ စားစား သိပ်အရေးမကြီးလှပါဘူး။ ဘယ်နည်းက ပိုသင့်လျော်တယ်လို့ အထူးတလည် ဝိဝါဒ ကွဲပြားနေစရာမလိုပါဘူး။ ဒါတောင်မှ ကိုယ်ရောက်နေရာ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို သတိပြုသင့်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်တယောက်တည်း စားနေတာ ဆိုရင်တော့ ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။
ဒါပေမယ့် တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာတော့ နည်းလမ်း (သို့မဟုတ်) လုပ်ရပ်ဟာ ရလဒ်ထက် ပိုမို အရေးကြီးနေတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ…. စာမေးပွဲဖြေတဲ့ ကိစ္စ ဆိုပါစို့။ စာမေးပွဲဆိုတာ လူတယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တခုပဲ။ အဲဒီ စာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းဖြစ်စဉ်မှာ စာမေးပွဲအောင်ခြင်းဆိုတာဟာ အကျိုးရလဒ်ကောင်းတခု ဆိုပါစို့။
အဲဒီရလဒ်ကို ရအောင် ကြိုးစားရာမှာ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိမယ်။ တနည်းက ကိုယ်ဖြေဆိုရမယ့် ဘာသာရပ်ကို ကျေကျေညက်ညက် နားလည်အောင် စေ့စေ့ငုငု ကြိုးစားလေ့လာထားမယ်။ နောက်တနည်းက သိပ်နားမလည်ပေမယ့် ဘာမေးမေး ဖြေနိုင်အောင် ကြက်တူရွေးကျက် ကျက်ပြီး အာဂုံဆောင်ထားမယ်။ နောက်တနည်းက စပေါ့တ်ရိုက်ပြီး ရွေးကျက်မယ်။ နောက်တနည်းက စာမေးပွဲခန်းထဲမှာ ခိုးချမယ်။ နောက်တနည်းက ဆရာဆရာမကို လာဘ်ထိုးပြီး မေးခွန်းကို ကြိုသိအောင် လုပ်ထားမယ်။
အဲဒီအထဲမှာ စပေါ့ရိုက်တဲ့နည်း (ရွေးကျက်တဲ့နည်း)က လွဲလို့ ကျန်တဲ့နည်းအားလုံးဟာ စာမေးပွဲအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ တူညီတဲ့ ရလဒ်ကို ရနိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ပထမဆုံးနည်းက လွဲရင် ကျန်တဲ့နည်းအားလုံးမှာ အနှစ်သာရ ကင်းမဲ့နေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ စာမေးပွဲဟာ လူတယောက်ရဲ့ နားလည်မှု (သို့မဟုတ်) ကျွမ်းကျင်မှု (သို့မဟုတ်) အရည်အချင်းကို စစ်တာဖြစ်လို့ ကျန်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သုံးခဲ့တဲ့လူဟာ စာမေးပွဲတော့ အောင်ချင်အောင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်မှာ အရည်အချင်းရှိသူတယောက်တော့ ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ တနည်းပြောရရင် အဲဒီလူရဲ့ အောင်မြင်ခြင်းမှာ တန်ဘိုး ကင်းမဲ့နေတယ်။ အနှစ်သာရ ကင်းမဲ့နေတယ်။ အဲဒီလို မကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ မိဘကိုယ်တိုင်က အားပေးအားမြှောက်ပြုခဲ့တယ်ဆိုရင် အဲဒီမိဘဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို ချစ်ရာမရောက်ဘဲ နှစ်ရာရောက်တယ်။ မိမိရင်သွေးကို လူညံ့ကလေးဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလိုက်တာနဲ့ အတူတူပဲ။
ဒါက ဥပမာ တခုပဲ ရှိသေးတယ်။ အဲဒီလို ရလဒ်ပဓာန၀ါဒီတွေကြောင့် အလားတူ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အခြားဥပမာတွေပေးရရင်….
ကစားပွဲမှာ နိုင်ရင်ပြီးရော…. လူချပြီး ကစားရ၊ ကစားရ။ ညစ်ပြီး ကစားရ ကစားရ… ဆိုတဲ့ အားကစားစိတ်မရှိတဲ့ အားကစားသမားတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်။
စီးပွားရှာရာမှာလည်း ချမ်းသာရင်ပြီးရော… ဘယ်နည်းသုံးရ သုံးရ…. ဆိုတဲ့ ဝိသမလောဘသားတွေ ပေါ်ပေါက်လာတယ်။
နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ရာမှာလည်း…..အာဏာရရင်ပြီးရော။ ဘယ်နည်းလမ်းသုံးရ…သုံးရ ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်တွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ နအဖကို သတိရကြပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင် အကျိုးရလဒ်ပဓာန၀ါဒီတွေကြောင့် လောကကြီး ဘယ်လောက် ကမောက်ကမ ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကို ရှင်းလင်းလောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
အလားတူပဲ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဖော်ဆောင်ရာမှာလည်း ဒီမိုကရေစီရရင်ပြီးရော…. ဘယ်နည်းကို သုံးရသုံးရ ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေပေါ်လာပြန်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီရဖို့ ဘယ်နည်းပဲသုံးရသုံးရဆိုတဲ့ အယူအဆကို ကျနော့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့ မရပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ပန်းတိုင်ရလဒ်ဆိုတာထက် နည်းလမ်းလို့ ပြောရင်ပိုမှန်မယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ပါဝင်တဲ့ လူအများစုက ဒီမိုကရေစီနည်းကျတဲ့ အပြုအမူတွေကို မကျင့်သုံးသရွေ့ အဲဒီ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ ဒီမိုကရေစီမထွန်းကားနိုင်ပါဘူး။ တခုတော့ ရှိတယ်။ ဘာစနစ်ဖြစ်ဖြစ် အရေးမကြီးဘူး။ နအဖ ပြုတ်ကျရင်တော်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်လာတဲ့ မောင်ပုလဲ ဒိုင်းဝန်ထက် မကဲဘူးလို့ ဘယ်သူအာမခံနိုင်သလဲ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ယုံလည်းယုံကြည်ရမယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း လက်တွေ့ ပြုမူကျင့်ကြံ နေထိုင်ပြောဆို ပြကြရမယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ပါးစပ်က ဘုရားဘုရား။ လက်က ကားယား ကားယား ဆိုတာလို အဲဒီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဆိုသူတွေအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှု တစထက်တစ လျော့ပါးသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီအကြောင်းတွေကို ပြောကြရင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတုန်းကလည်း လွတ်လပ်ရေးရဖို့ ဖက်ဆစ်နဲ့တောင် ပေါင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါလားလို့ တချို့က မေးကြတယ်။ ဒီမေးခွန်းဟာ မတူညီတဲ့အရာတွေကို ရောထွေးစဉ်းစားရာက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ မေးခွန်းလို့ မြင်ပါတယ်။
နယ်ချဲ့လက်အောက်က တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက် ကွန်မြူနစ်နဲ့ပေါင်းပေါင်း၊ အရင်းရှင်နဲ့ပေါင်းပေါင်း စနစ်က အရေးမကြီးလှဘူး။ ဥပမာ… အခုနေ မြန်မာပြည်ကို ယိုးဒယားကနေ ကျူးကျော်ရန်စ တိုက်ခိုက်လာတယ်ဆိုပါတော့။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်၊ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ယိုးဒယားကို ခံတိုက်ရမှာပဲ။ အဲဒီအချိန်မှာ ကွန်မြူနစ်တရုတ်ကပဲ ကူညီကူညီ၊ ဒီမိုကရေစီ အိန္ဒိယက ကူညီကူညီ၊ ရတဲ့ အကူအညီကို ယူရမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီတိုက်ပွဲဟာ တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ။ စနစ်တခုပြောင်းလဲဖို့ တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူး။
ဒါတောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအနေနဲ့ ဖက်ဆစ်တွေကို ပေါင်းမိတာ မှားပြီဆိုတာ သူအစောကြီးကတည်းက ချက်ချင်းသိတယ်။ မြန်မာပြည်ထဲ ပြန်ဝင်လာကတည်းက ပြန်ချဖို့ တပါတည်း စီစဉ်တော့တာပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဘ၀ဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာကြည့်ရင် နောက်ပိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီနည်းနာတွေကို အားပေးတယ်၊ ကျင့်ကြံတယ်၊ ပြုမူတယ်ဆိုတာတွေကို အထင်အရှား တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ပြန်ချုပ်ရရင် တိုင်းပြည်ကို တိုင်းတပါးလက်အောက်က လွတ်လပ်အောင် တိုက်ခိုက်ရာမှာ စနစ်က ပဓာနမကျခဲ့ဘူး။ ကွန်မြူနစ်ဆီက အကူအညီယူသည်ဖြစ်စေ၊ အရင်းရှင်ဆီက အကူအညီယူသည်ဖြစ်စေ လွတ်လပ်ဖို့သာ ပဓာနဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို တိုင်းပြည်ကို အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကူးပြောင်းရာမှာတော့ သုံးချင်တဲ့ နည်းကို သုံးလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုဟာ သဘောသဘာဝ လုံးဝမတူခြားနားနေတယ်။
ကျနော့်မိတ်ဆွေတယောက် ပြောဖူးတဲ့ စကားကို ကိုးကားရမယ်ဆိုရင်…. “အိမ်တအိမ်မီးလောင်နေရင် ရေသန့်နဲ့ပက်ပက်၊ သဲနဲ့ ပက်ပက်၊ ဗွက်နဲ့ပက်ပက်၊ မြောင်းပုပ်ထဲက ရွှံ့ပုပ်နဲ့ ပက်ပက် ကိစ္စမရှိဘူး။ မီးလောင်တဲ့ အိမ်ကို မီးငြှိမ်းသတ်တဲ့ ကိစ္စမှာ တရားမျှတဖို့မလိုဘူး၊ တန်ဘိုးတွေ စောင့်ထိန်းနေဖို့မလိုဘူး။ (ဒါတောင် အိမ်ထဲမှာ ပီကာဆိုပန်းချီကားလို အဖိုးတန်ပန်းချီကားတွေ ရှိနေလို့ အဲဒီလို တန်ဘိုးရှိတာတွေကို မပျက်စီးစေချင်ရင် ရွှံ့ပုပ်နဲ့ ပက်မယ့်ကိစ္စကို နှစ်ကြိမ်ပြန်ပြီး စဉ်းစားသင့်သေးတယ်။) ဒါပေမယ့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို မီးလောင်နေတဲ့ အိမ်နဲ့ နှိုင်းတာကတော့ အင်မတန် ရိုးစင်းလွန်းတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းမှာ တိကျတဲ့ နည်းလမ်းတော့မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် တိကျတဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေတော့ ရှိတယ်ဗျာ”….တဲ့။
ကျနော် သူ့စကားကို အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ဘယ်နည်းနဲ့သွားရ သွားရ အရေးမကြီးဘူး၊ ရောက်မယ်လို့ တွေးထင်တဲ့လူတွေဟာ နအဖရဲ့ တွေးခေါ်ပုံနဲ့ ဘာမှ မခြားနားဘူးဆိုတာကို သွားတွေ့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နအဖ စစ်အစိုးရကလည်း သူတို့ စိတ်တိုင်းကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ လမ်းပြမြေပုံအတိုင်း စည်းကမ်းရှိသော ဒီမိုကရေစီတို့၊ မြန်မာ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် ကိုက်ညီသော ဒီမိုကရေစီတို့ စသဖြင့် အဲဒီလမ်းကြောင်းတွေအတိုင်း သွားဖို့ ကြိုးစားနေတာ မဟုတ်ဘူးလား။ “အဲဒီနည်းနဲ့ ရောက်မယ်ထင်ရင် အသာမှိန်းပြီး လိုက်သွားကြပေါ့။”…လို့ တိုက်တွန်းရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။
“ဟာ….နအဖဆိုတာက ယုတ်မာတဲ့အကောင်တွေကွ၊ ဒီကောင်တွေက ဒီမိုကရေစီကို တကယ်သွားချင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီအကောင်တွေမို့ မယုံကြည်နိုင်တာ။ ကျန်တဲ့လူတွေက ဒီလောက်မဆိုးဘူး”…လို့လည်း လာမပြောပါနဲ့။ နအဖကလည်း သူ့ပါးစပ်ကတော့ ကျနော်တို့လိုပဲ ဒီမိုကရေစီကို သွားချင်ပါတယ်လို့ တချိန်လုံးပြောနေပါတယ်။ ဦးသန်းရွှေ တနှစ်တခါပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေထဲမှာလည်း ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖကို ဘာလို့မယုံကြည်ရသလဲ။ နအဖ အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ၊ အခု ပစ္စုပ္ပာန်မှာ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကြည့်ပြီး၊ သူတို့လုပ်ရပ်တွေရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေကြည့်ပြီး ဒီမိုကရေစီရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက် မယုံကြည်နိုင်တာပေါ့။
လူတွေဆိုတာ ကိုယ်တွေးကြံသမျှ အတွေးတွေ၊ ကိုယ်ပြုသမျှ လုပ်ရပ်တွေ၊ ကိုယ်ပြောသမျှ အပြောအဆိုတွေကနေ ကိုယ့်သဘာဝကို အမြဲ ပြန်လည် ထုဆစ်နေတယ်ဆိုတာ သတိပြုမိပါတယ်။။ ဒီကနေ့ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတွေ၊ အကျင့်အကြံတွေကို ကိုယ်တိုင်မလိုက်နာနိုင်တဲ့သူ၊ လူ့အခွင့်အရေးကို ကိုယ်တိုင် လေးစားရကောင်းမှန်းမသိသူတွေဆိုရင် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားပါလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လောက်ပဲ ကြွေးကြော်နေပါစေ၊ ဘယ်လောက်ပဲ မျိုးချစ်စိတ်ရှိတယ်လို့ ပြောနေပါစေ၊ ဒီလူတွေကို ယုံကြည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အခု အာဏာမရသေးခင်မှာတောင် ဒီလောက် စည်းကမ်းမဲ့တာ။ ဒီလောက် ကိုယ့်အလိုဆန္ဒကိုယ် မချုပ်တည်းနိုင်တာ။ ဒီလောက် အကြမ်းဖက်ဝါဒကို နှစ်ခြိုက်တာ။ အာဏာရပြီးရင် နအဖထက် ဆယ်ပြန်လောက် ဆိုးနိုင်တယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ယုံမျှနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဦးဝင်းတင်တို့ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကို လေးစားကြတယ်ဆိုတာ သူတို့ဟာ သူတို့ ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ Principle ကို ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့မှ မချိုးဖောက်ခဲ့ဘူး။ သူတို့ ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့ တန်ဘိုးတွေကို ဘယ်တော့မှ ပစ်မချခဲ့ဘူး။ အခုထိလည်း မြဲမြဲမြံမြံ စွဲကိုင်ဆဲပဲ။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ကို အခုအချိန်အထိ ကျနော်တို့ ယုံကြည်တယ်။ လေးစားတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်း လေနာထနေတဲ့ ရဟန်းကြီးတပါးကို လေနာသက်သာအောင် မွန်းလွဲအစာစားဖို့ တိုက်တွန်းတဲ့အခါ “ငါ့ကိုယ်ထဲကအူတွေ အစာဆာလို့ ငါ့ကိုယ်အပြင်ဖက်ကို ထွက်ပြီး အစာရှာချေဦးတော့၊ ငါကတော့ စည်းကမ်းကို မဖောက်ဖျက်နိုင်ပါ” ဆိုတာမျိုးပြောပြီး အစာမစားပဲ နေခဲ့တာရှိတယ်။ အဲဒီလို အသက်နဲ့လဲပြီး သံမဏိစည်းကမ်းရှိသူတွေကို ကျနော်လေးစားတယ်။ ပျော့ချည်ပျောင်းချည် ဖယောင်းစည်းကမ်းသမားတွေကိုတော့ မယုံစားဝံ့ဘူး။ အိုင်းစတိုင်းကလည်း ပြောခဲ့ဘူးတယ်လေ။ အသေးအဖွဲမှာတောင် မယုံကြည်ရတဲ့လူတွေကို ကြီးကြီးမားမားကိစ္စတွေမှာ သာပြီးတော့တောင် မယုံကြည်သင့်ဘူးဆိုတာကိုပေါ့။
ဒီတော့ ကိုယ်လုပ်သမျှအလုပ်(ကံ)ဟာ ကိုယ့်ပုံရိပ်၊ ကိုယ့်သဘာဝနဲ့ ကိုယ့်လားရာကို ထုဆစ်နေတာ လူတိုင်း သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ညောင်ပင်စိုက်ပြီး ပန်းသီးစားချင်လို့တော့ မဖြစ်ချေဘူး။ ညောင်ပင်စိုက်ရင် ညောင်သီးပဲ စားရမှာပေါ့။ ညောင်ပင်စိုက်ပြီး ပန်းသီးစားရလိမ့်မယ်လို့ ထင်မှတ်နေတယ်ဆိုရင် သေသာ သေသွားမယ်။ ပန်းသီးကိုတော့ စားလိုက်ရမှာမဟုတ်။ ကံမကောင်းရင် “ညောင်ပင်တစ္ဆေ ဝေလေလေ၊ နင်ဘာသီးစား ညောင်သီးစား” ဘဝရောက်သွားနိုင်ပါကြောင်း။
Posted by ကိုပေါ on Thursday, October 1, 2009
(စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာ ၉ နှစ်ကြာ နေထိုင်သွားခဲ့တဲ့ ဂျာမန်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေလို့ အဆိုရှိပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ် မသေချာပါ။ ဒါပေမယ့် စင်္ကာပူကအခြေအနေတွေကို တော်တော်လေး မှန်ကန်စွာ ထင်ဟပ်ပြနိုင်ပြီး ပြုံးချင့်စဖွယ်လည်းဖြစ်လို့ ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။)
၄၄ နှစ်ကြာ စီးပွားရေးနဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာအရ အောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အပြုအမူ အလေ့အထတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါသတဲ့။
သူတို့ဟာ အိမ် (သို့မဟုတ်) တိုက်ခန်း တခန်းကို ငွေအမြောက်အမြား ပေးဝယ်ပြီး ပရိဘောဂတွေနဲ့ နန်းတော်ကြီးတမျှ ပြင်ဆင်တတ်ကြပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အိမ်မှာ နေတဲ့အချိန်က နည်းပါးပြီး အပြင်မှာ၊ အထူးသဖြင့် အလုပ်ထဲမှာ အချိန်ဖြုန်းတာ များပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သန်းချီတန်တဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို အမှန်တကယ် စံစားနေကြသူတွေကတော့ သူတို့အိမ်က အိမ်ဖော်များသာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
သူတို့ဟာ မော်တော်ကားတွေကို ဈေးကြီးပေးဝယ်ယူကြတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မော်တော်ကားဈေး အမြင့်ဆုံးနိုင်ငံလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ပြီးတာနဲ့ အဲဒီကားကို အိမ်မှာပဲ ရပ်ထားတော့တယ်။ အပြင်မှာ ထုတ်မောင်းဖို့ အင်မတန်ဈေးကြီးပါတယ်။ ERP လို့ခေါ်တဲ့ လမ်းဂိတ်ကြေးကောက်တဲ့ ဂိတ်တွေဟာ အများအပြား ရှိနေပြီး မော်တော်ယာဉ် ရပ်နားခကိုလည်း နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ပေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူတို့ကားကို အိမ်မှာ ရပ်ထားပြီး အဖိုးအခသက်သာစွာနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ အများသုံး သွားလာရေးစနစ် (ဘတ်စ်ကား၊ MRT စသည်) ကိုပဲ သုံးကြဖို့ တွန်းအား အပေးခံရပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေ ခရီးထွက်ကြတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုမယ့်အစား ရှော့ပင်း (ဈေးဝယ်) ထွက်ကြပါတယ်။ အံ့သြဖို့ကောင်းတာကတော့ စင်္ကာပူက တရုတ်တန်းနဲ့ ညဈေးတွေမှာ ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ပေါပေါလောလော ဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကို နိုင်ငံခြားမှာ အသည်းအသန် ဈေးဆစ်ပြီး ဝယ်ယူတတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့… အဲဒီလို ဈေးဆစ်ပြီး ဝယ်နိုင်ခဲ့တာကိုပဲ ပျော်နေတတ်ကြပါသေးတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံသားအများစုဟာ ရှင်သန်နိုင်ဖို့ အသည်းအသန် မနည်းရုန်းကန်နေကြရပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကျေနပ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားမိရင် “မကျေနပ်ရင် ထွက်သွားလိုက်” လို့လည်း အပြောခံရတတ်ပါသေးတယ်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး စင်္ကာပူက ဘဝကို အင်မတန် သဘောကျနှစ်သက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံသားများကတော့ အရေးအကြောင်းဆိုရင် ဒီသုခဘုံကလေးကနေ အလျှင်အမြန်ထွက်သွားနိုင်ဖို့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အိမ်တွေယာတွေ ဝယ်ယူထားကြပါတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံသားအများစုဟာ ဒီနိုင်ငံကနေ ရွှေ့ပြောင်းပြေးနိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေကြတယ်။ ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အခြားနိုင်ငံများမှ ရွှေ့ပြောင်းအခြေချလာသူ လူသစ်များကတော့ သူတို့နေရာကို အစားထိုးဝင်ရောက်နေကြလေရဲ့။
အထူးဆန်းဆုံးကတော့ စင်္ကာပူနိုင်ငံသားတွေဟာ သူတို့ အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲတစေ ငြီးတွားပြောဆိုနေတတ်ကြပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲလည်း ရောက်ရော ဒီအစိုးရကိုပဲ မဲထည့်ပြီး အာဏာပြန်လည် အပ်နှင်းတတ်ကြပါတယ်။
မူရင်းကို ဖတ်ရှုရန်။.............။ The Bizarre Behaviour of Singaporeans
Labels: translation Comments: (24)